Safarka Xalaal ee Masar - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Jamhuuriyadda Carabta ee Masar wuxuu ku yaal waqooyi-bari Afrika. Masar waxaa laga yaabaa inay sida ugu fiican ugu caansan tahay hoyga ilbaxnimadii hore ee Masar, oo leh farshaxankeeda, macbudyo, hieroglyphs, mummies, iyo wixii ka sarreeya, Ahraamtooda. Si aad ufiican looma yaqaan waa dhaxalka Masar ee Masiixiyiinta iyo Muslimiinta, oo leh kaniisado qadiimi ah, suugaan iyo masjidyo kuyaala dhulka. Masar waxay kicisaa mala awaalka dalxiisayaasha reer galbeedka sida dalal kale oo yar waana macquul inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago adduunka oo dhan.
Khariidad gobalada Masar iyo meelaha waaweyn ee dalxiiska loo tago
Waqooyiga Niil Delta, iyo xeebta badda Dhexe; Qaahira, Alexandria
Agagaarka webiga Niil ee ay ku kulmeen boqortooyooyinkii Sare iyo Hoose ee taariikhiga ahaa
Xargaha magaalooyinka macbadka ee cajiibka ah oo ku yaal dhinaca koonfureed ee wabiga Niil
Goobta Oases-ka Reer Galbeedka: shan jeeb oo cagaar ah, oo mid waliba leh soo jiidasho u gaar ah
Goobaha xeebta raaxada, quusitaanka iyo nolosha badda
Jasiirad ciriiri ah oo go'doon ah, oo ay ku jiraan waxyaalo soojiidasho leh oo la soo dhaafay, buuro dhaadheer iyo quus weyn
Qaahira Weyn - waa caasimada Masar, oo hoy u ah Ahraamta Giza, Matxafka Masaarida iyo qaabdhismeedka islaamka ee cajiibka ah
Alexandria - Daaqadda Masar ee badda Mediterranean-ka, oo leh muuqaalo weli la taaban karo oo tagtay
Aswan - ikhtiyaar ka dabacsan Luxor, oo ay ka buuxaan aragtiyo yaab leh
Hurghada - magaalo ku taal Badda Cas, oo ay ka buuxaan dalxiisyo loo dhan yahay iyo xulashooyin badan oo quusid ah
Luxor - marinka loo maro Dooxada Boqortooyada, oo ka mid ah meelaha soo jiidashada leh ee cajaa'ibka leh, iyo caasimadda dhibaatada leh ee Masar
Dekadda ayaa tidhi - Xarunta aagga saddexaad ee ugu weyn magaalo -weynta, waxay leedahay hidaha guud, oo hoy u ah Laydhka Port Said
Sharm el-Sheikh - waa magaalo dalxiis oo caan ah oo ku taal gacanka Sinai, oo leh qaar ka mid ah quusitaanka ugu fiican adduunka
Quseir - waa magaalo taariikhi ah oo leh magaaladii hore ee Fort iyo Down ee xeebta Badda Cas, oo leh qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu quusto iyo meelaha loo dalxiis tago ee Masar.
Abu Simbel - waa magaalo aad u fog oo ku taal koonfurta fog, oo leh macbadyo qadiim ah oo qadiim ah iyo taariikh gooni ah
Dahab - oo ku taal Siinaay, bariga Sharm el Sheikh, waa meel boorso dhab ah ku taal, oo leh quus aad u fiican
Luxor / East Bank - macbudyo kala firidhsan oo la dhisay iyada oo xoogga la saarayo cabbirka, dariiq aad u wanaagsan oo loo yaqaan 'sphinxes' oo madax-madaxu yahay
Memphis - oo labaduba ay ka buuxaan waxyaalo haraaga ah iyo burburkii Masar hore, badiyaa waxaa la isugu daraa sidii safar maalinle ah oo looga soo tago Qaahira
Siwa - waa dhul aad u qurux badan oo u dhow xudduudda Liibiya
Mount Sinai - hoy u ah kaniisad ugu da'da weyn ee sida joogtada ah loo deggan yahay, Mount Sinai iyo Mount Katherine (buurta ugu dheer Masar) iyo runti dhaqanka Baadiyaha
Taba Heights - ujeeddo loo dhisay dalxiis oo leh aragtiyo Israa'iil, Jordan iyo Sacuudi Carabiya
Dooxada Boqorka - Wādī al Mulūk)
Kaniisadda St. Katherine
Masar sidoo kale waxay ku fidsan tahay Aasiya iyada oo loo marayo haysashada Siinay. Masar waxaa xuduud la leh Israel iyo Gaza Strip waqooyi-bari, Suudaan koonfurta iyo Liibiya galbeed. Wadanka waxaa kuxiran bada Mediterranean-ka iyo Badaha Cas (waqooyiga iyo bariga siday u kala horreeyaan) waxaana juquraafi ahaan gacanta ugu haya webiga Niil iyo dooxadiisa barwaaqaysan ee sida wanaagsan loo waraabiyo, iyo lama degaanka Bariga iyo Galbeedka
In kasta oo Masar ugu horrayn loo yaqaan dalxiis u taga iyo Ahraamta, haddana waxa kale oo xusid mudan inay leedahay dadka ugu badan adduunka ku hadla afka Carabiga, iyo waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan Afrika ka dib Koonfur Afrika.
Ahraamyada Giza uma baahna hordhac dheeraad ah
Joogtaynta iyo hodantinimada fatahaadda webiga Niil ee sannadlaha ah, oo ay weheliso go'doomin nuskeed ah oo ay bixiyeen lamadegaanka bariga iyo galbeedka, ayaa loo oggolaaday horumarinta mid ka mid ah ilbaxnimada adduunka ugu weyn. Boqortooyo midaysan ayaa kacday qiyaastii 3200 BC iyo taxane boqortooyooyin ah oo laga xukumay Masar saddexda sano ee soo socota. Boqortooyadii ugu dambaysay ee u dhalatay waxay ku dhacday gacanta reer Faaris 341 BC, kuwaas oo iyagana lagu beddelay Griiga, Roomaanka, iyo Byzantines. Waxay ahaayeen Carabtii soo saartay diinta Islaamka iyo luqadda Carabiga qarnigii 7-aad oo iyagu xukumayay lixda qarni ee soo socda. Koox millatari oo maxalli ah, Mamluks, waxay la wareegeen qiyaastii 1250 waxayna sii wadeen inay xukumaan ka dib qabsashadii Masar ee Turkidii Cusmaaniyiinta ee 1517. Ka dib markii la dhammaystiray Marinka Suez ee 1869, Masar waxay noqotay xarun muhiim u ah isu socodka adduunka, laakiin sidoo kale waxay aad u dhacday deyn. Si xoog leh si loo ilaaliyo maal-gashigyadeeda, Ingiriisku wuxuu la wareegay gacan ku haynta dowladda Masar sanadkii 1882, laakiin daacad u noqoshada Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa sii socotay illaa 1914. Masar waxay xorriyadda ka heshay Boqortooyada Ingiriiska qayb ahaan 1922. Dhameystirka Biyo-Xireenka Aswan ee 1971 iyo natiijada ka dhalatay Harada Nasser waxay bedeleen meeshii mudnayd ee webiga Niil ee beeraha iyo bey'ada Masar. Dad si xawli ah u koraya (kan ugu badan dunida Carabta), dhul-beereedka xadidan, iyo ku-tiirsanaanta Niilka dhammaantood waxay sii wadaan inay ka badbadaan kheyraadka iyo culeyska bulshada. Dawladdu waxay ku dhibtooday inay dhaqaalaha u diyaariso qarniga 21-aad iyada oo u maraysa dib-u-habeyn dhaqaale iyo maalgashi ballaaran oo dhanka isgaarsiinta iyo kaabayaasha jirka ah.
Cimilada Masar guud ahaan waxaa lagu tilmaamaa lamadegaan. Waa fiditaan ka mid ah Saxaraha weyn ee isku xira Waqooyiga Afrika, marka laga reebo dhuudhuubka dhuuban ee dhulka waraabiya ee webiga Niil, in yar oo ka mid ah ayaa ku noolaan kara halkaas. Sida taariikhyahankii hore ee Griigga ee Herodotus ku sheegay: "Masar waa hadiyadda Niilka".
Ka taxaddar in laga bilaabo Maarso illaa Maajo, duufaannada ciiddu ay dhici karaan, gaar ahaan xilliga maalinta. Duufaannadaasi ma aha oo keliya inay hawada ka dhigayaan mid bacaad leh oo aad u qalalan, laakiin sidoo kale waxay si ku meelgaar ah kor ugu qaadaan heer kulka Dabaylaha ciidda waqtiyada kale ee sanadka wali way qarxi karaan laakiin marar dhif ah iyo xilliga qaboobaha, caadi ahaan kor uma qaadi doonaan heerkulka.
Lamadegaanka u dhow Siwa
Guud ahaan, xagaaga waa kuleyl, roob la'aan iyo qorax aad u badan, laakiin hawadu waxay noqon kartaa mid qoyan xeebaha, aadna ugu qallajin kartaa koonfurta, meelaha fog iyo xeebta Niil Delta. Jiilaalku waa dhexdhexaad. Nofeembar illaa Maarso xaqiiqdii waa bilaha ugu raaxada badan ee safarka Masar. Kaliya xeebta waqooyi (oo ka fidsan badda illaa 50 km dhanka koonfureed) ayaa hela roob yar xilliga qaboobaha; Masar inteeda kale waxay helaysaa roobab dayacan ama aan helin.
Duufaannada oo ay weheliyaan roobab culus oo da'a oo saacado badan soconaya kuma cusba Alexandria, Marsa Matruh iyo dhammaan aagagga kale ee xeebta waqooyiga, iyo xitaa Delta. Sannadaha qaarkood roobabku waxay socon karaan maalin dhan ama in kale, in kastoo roobku u muuqdo inuu fudud yahay. Sidoo kale roobabku ma ahan wax aan caadi ahayn, gaar ahaan cidlada oo cimiladu inta badan qabow tahay oo u oggolaanaysa in roob dhagaxyaale jilicsan soo dego iyo xitaa dhaxan si ay u sameysmaan maalmaha aan roob-doonka ahayn.
In ka Buuraha Siinaay iyo waliba buuraha Badda Cas, oo ku fidsan dhinaca bari ee dalka dhinaca xeebta Badda Cas, guud ahaan waxaa jira roobab ka badan lamadegaanka ku xeeran, maadaama daruuraha roobku u janjeeraan inay soo baxaan marka hawo diirran u uumi baxdo oo ay kacdo markay ka gudubto dhul sare Daadadka meelahaas ka jira waa wax caadi ka ah cimilada maadaama roob aad u badani ku dhici karo waqti aad u yar (badiyaa maalin ama laba), iyadoo onkod iyo danabna ay sidoo kale dhici karaan. Sababtoo ah lamadegaanka iyo la'aanta dhir aad u tiro badan, biyaha roobka ayaa si dhakhso leh ugu daadanaya buuraha iyo buuraleyda isla markaana ku fatahaya aagagga. Sannad kasta waxaa jira sheekooyin ku saabsan wargeysyada maxalliga ah ee ku saabsan daadadka daadadka ah ee aagga Siinay iyo sidoo kale Upper Egypt (koonfurta Masar) sida Assiut, Luxor, Aswan, iyo Sohag. Daadadkan, si kastaba ha noqotee, waxay guud ahaan dhacaan laba ama saddex jeer sanadkii, mana dhacaan haba yaraatee sannadaha qaarkood. Markay dhacaan, hase yeeshe, badanaa waa xilliyada hore ee xilli sida bisha Sebtember ama Oktoobar, ama dhammaadka jiilaalka sida Febraayo. Khatartaas darteed, qofku waa inuu taxaddar muujiyaa markii uu u baxayo cidlada ama deegaamaynta meelaha qaarkood, maadaama biyuhu si lama filaan ah uga soo dhici karaan buuraha iyo buuraha ku dhow. Waxay mararka qaarkood qaadi kartaa duruuf xoog badan oo la ogaa inay dumiso guryaha dadka reer miyiga ah ee guryahooda ka dhista dhoobo, leben, iyo waxyaabo kale oo daciif ah. Dadka saboolka ah ayaa laga yaabaa inay ku qarqiyaan daadka, taas oo la yaab ku ah dal lamadegaan ah oo aan helin roobab badan.
Sidoo kale, meelaha sare sida buuraha Siinay dusheeda, heer kulka ayaa aad uga yaraan kara meelaha ku hareeraysan, taasoo u oggolaaneysa barafka xilliga bilaha jiilaalka, maadaama heerkulku hoos ugu dhici karo ka hooseeya qabowga, iyo sidoo kale sameynta baraf xitaa meelaha hooseeya meelaha jiifka ah ee heerkulku guud ahaan dhowr darajo ka qabow yahay magaalooyinka.
Diseembar, Janaayo iyo Febraayo waa bilaha ugu qabow sanadka. Si kastaba ha noqotee, maalmaha jiilaalka ee meelaha koonfureed ee Dooxada Niil way ka diirran yihiin, laakiin habeennadoodu waa qabow sida meelaha woqooyiga.
Soo-booqdayaashu waa inay ogaadaan in guryaha iyo guryaha badankood ee Masar aysan lahayn kuleyl dhexe sida wadamada leh jawiga qabow, maxaa yeelay dareenka ugu weyn ee cimilada Masar waa kuleylka. Sidaa darteed, in kasta oo cimiladu uunan qabow u noqon karin qof reer galbeed ah, guriga gudihiisa waxaa laga yaabaa inuu maalintii ka qabowdo laakiin heerkulka gudaha ayaa ka xasilloon dibadda. Qaahira, dhismooyinka gudaha ee aan lahayn qaboojiyaha, heerkulku waa qiyaastii 15 ° C (59 ° F) maalmaha qaboobaha ugu qabow iyo ilaa 34 ° C (93 ° F) maalmaha xagaaga ugu kulul.
Bangiyada, dukaanada iyo meheradaha ayaa xira ciidaha soo socda ee Masar (kuwa madaniga ah iyo kuwa diineed), iyo gaadiidka dadweynaha waxaa laga yaabaa inay qabtaan adeegyo kooban oo keliya
7 Janaayo (Kirismaska ​​Bariga Orthodox)
25 Janaayo (Maalinta Kacaankii Masar)
25 Abriil (Maalinta Xorriyadda Siinaay)
1 Meey (Maalinta Shaqaalaha)
23 Luulyo (Maalinta Kacaanka Julaay)
6 Oktoobar (Maalinta Ciidamada Qalabka Sida)
1-Shawaal, bisha 10-aad ee Hijriga (Ciidul Fitriga, “Quraacda Quraacda”)
10-ka Dhu al Hijjah, bisha 12-aad ee Hijriga (Ciidul Adxaa, "Iiddii allabariga")
Ku shaqeynta saacado gaagaaban oo ah 29 ama 30 maalmood oo Ramadaan ah
Maaddaama ciidaha Islaamku ay ku saleysan yihiin kalandarka dayaxa, taariikhahooda saxda ahi way kala duwan yihiin sannadaha
Ramadaan waa bisha sagaalaad ee kalandarka Islaamka waana bisha ugu muhiimsan ee Kalandarka Islaamka ee Muslimiinta, diinta ugu badan ee Masar. Xusidda markii uu Ilaahay Quraanka u soo dejiyey Maxamed, inta lagu guda jiro bishan barakaysan, Muslimiinta way ka fogaadaan cunidda, cabbidda ama sigaar cabidda illaa qorrax dhaca maalin kasta. In kasta oo u hogaansanaanta ramadaanka ay u gaar tahay muslimiinta oo kaliya, hadana qaar ka mid ah muslimiinta waxay qadariyaan in dadka aan muslimiinta ahayn aysan wax ka cunin ama aysan sigaar ku caban goobaha bulshada. Inta lagu jiro Ramadaanka, makhaayado badan iyo makhaayado badan ma furnaan doonaan illaa qorraxdu dhacdo. Gaadiidka dadweynaha ayaa aad u yar, dukaamada ayaa xirma goor hore ka hor qorrax dhaca iyo xawaaraha nolosha (gaar ahaan ganacsiga) guud ahaan waa gaabis.
Sidii la filaayey, si sax ah marka ay qorraxdu dhacdo, dalka oo dhan wuu xasilloon yahay oo wuxuu ku mashquulsan yahay cunnada ugu weyn ee maalinta (afurka, "afur-soon") oo had iyo goor loo sameeyo dhacdooyinka bulshada ee kooxo badan oo asxaab ah. Dad badan oo taajir ah ayaa ku bixiya (Miisaska Ilaaha naxariista badan موائد الرحمن) waddooyinka Qaahira jidadkooda oo si bilaash ah loogu cuno dadka jidka maraya, kuwa saboolka ah ama shaqaalaha aan ka tagi karin xilligooda. Salaaduhu waxay noqdaan dhacdooyin caan ah oo 'bulsho' ah oo qaarkood ay jecelyihiin inay ku kobciyaan daaweynta cuntada gaarka ah kahor iyo kadib. Saacad ama laba kadib, gu 'yaab leh oo nolosha magaalooyinka ayaa dhaca. Wadooyinka mararka qaar si qurux badan loo qurxiyo bisha oo dhan waxay leeyihiin saacado ciriiri ah oo isdaba joog ah ilaa subaxa hore. Dukaamada iyo makhaayadaha qaarkood ayaa sameeya qaybta ugu weyn ee faa'iidadooda sannadlaha ah xilligan oo kale sanadkii. Kharashka xayeysiinta ee telefishanka iyo raadiyaha ayaa kor u kacay muddadan iyo bandhigyada madadaalada ayaa maraya meeshii ugu sarraysay.
Masar waxay ka kooban tahay dhul ballaadhan oo lama degaan ah oo ay kala gooyaan dooxada Niil iyo Delta, oo ay weheliso gacanka Siinay. Qaybo ka mid ah dooxada webiga Niil waxaa ku xeel dheer buuro dhaadheer oo dhagaxyo ah, halka bangiyadu ay siman yihiin meelaha kale, taasoo u oggolaanaysa wax soo saarka beeraha.
Masar waxay ka mid tahay saddexda dal ee Bariga Dhexe ee u dulqaata muwaadiniinta Israa’iil dalkooda. Sidan oo kale, gelitaanka Masar wax dhib ah kuma noqon doonto dadka wata Baasaboorka Israel. Si kastaba ha noqotee, haddii arrintani ay adiga khusayso, akhri dhibaatada Visa.
Siyaasadda Visa ee Masar
Maaddaama ay tahay meel dalxiis oo weyn oo dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay lacagta dalxiiska, Masar way fududahay in la galo iyo / ama la helo fiisooyinka haddii loo baahdo. Waxaa jira saddex nooc oo fiisaha Masar ah:
Visa Dalxiis - badanaa waxay shaqeyneysaa 3 bilood ama ka yar waxaana lagu siiyaa hal ama dhowr galitaan
Gelitaanka Fiisaha - waxaa looga baahan yahay ajaanib kasta oo u yimaada Masar ujeedooyin aan ka ahayn dalxiis, tusaale shaqo, waxbarasho. Haysashada Visa Galitaan Sax ah ayaa loo baahan yahay si loo dhammaystiro nidaamka deganaanshaha Masar.
Visa-ka Transit - waa dhif in loo baahdo oo kaliya jinsiyadaha qaarkood
Fiisooyinka gelitaanka waxaa laga heli karaa ergooyinka diblomaasiyadeed ee Masar iyo qunsuliyadaha dibadda ama waaxda fiisaha gelitaanka ee Dukumintiyada Safarka, Maamulka Socdaalka iyo Jinsiyadaha (TDINA). Dadka aan Masaarida ahayn waxaa looga baahan yahay inay haystaan ​​baasaboor sax ah.
Visa markaad timaado waxaa diyaar u ah dalal badan oo reer galbeed ah; hoos eeg. Muwaadiniinta, si kastaba ha noqotee, waddamada soo socda ayaa looga baahan yahay inay haystaan ​​fiiso inta aysan imaan, taas oo ay tahay in laga dalbado qunsuliyadda Masar ama safaaradda ka baxsan Masar:
Sharm el-Sheikh iyo hareeraheeda waxaa booqan kara fiiso la’aan qaar ka mid ah jinsiyadaha haddii kale u baahan fiisada Masar
Soo-booqdayaasha soo galaya Masar dhinaca marinka xadka ee Taba ama garoonka diyaaradaha Sharm el-Sheikh waa laga dhaafi karaa fiisaha oo waxaa la siin karaa fiiso gelitaan oo afar iyo toban maalmood ah si ay u booqdaan xeebta Aqaba ee jasiiradda Sinai, oo ay ku jiraan Sharm el Sheikh, Dahab iyo St. Kaniisad Katoolin. Soo-booqdayaasha doonaya inay ka baxaan gacanka Siinay oo ay booqdaan Qaahira iyo magaalooyinka kale ee Masar waxaa looga baahan yahay inay haystaan ​​fiisooyin Masaari ah oo buuxa, in kasta oo si adag loo hadlo waxaa jira suurtagal yar oo aan cidina baari doonin tan mooyee inaad isku daydo inaad dalka ka baxdo mooyee. Kuwani kama soo baxaan isgoyska Taba waana in horay looga sii iibsadaa waddanka ay deggan yihiin, qunsuliyadda Masar ee Eilat ama garoonka diyaaradaha markay yimaadaan. Soo-booqdayaasha booqashooyinka abaabulan badanaa waxay awood u yeelan karaan in fiisooyinkooda laga soo saaro xadka, laakiin waa inay horay u sii caddeeyaan wakiilkooda socdaalka ama hawlwadeenka socdaalka haddii ikhtiyaarkan la heli karo. Kuwa haysta sharciga degenaanshaha looma baahna inay helaan fiiso soo galitaan ah haddii ay dalka ka baxaan oo ay dib ugu soo laabtaan iyada oo ay ansax tahay sharciga degenaanshahoodu ama lix bilood gudahood, hadba muddada ka yar.
Dalxiisayaasha booqanaya Sharm el Sheikh ee qorshaynaya inay ku quustaan ​​xeebaha meelaha ka baxsan aagga (ie Ras Mohammed) waa inay helaan fiisaha dalxiiska si ay uga baxaan aagga Sharm el Sheikh. Saraakiisha doonyaha ayaa laga yaabaa inay fiiriyaan doomaha quusitaanka inta ay biyaha ku jiraan sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad hore u hesho fiisaha: waxaa jiri kara ganaaxyo ku lug leh adiga iyo kabtanka doonta haddii lagu qabto adiga oo aan haysan fiiso habboon. Inta badan Xarumaha quusidda ee sumcad leh ayaa ku weydiin doona inay fiisadaada arkaan ka hor inta aysan kuu oggolaan safarada.
Masar waxay xiriir nabadeed la leedahay Israa’iil, laakiin heerka saaxiibtinimadu wuu ku kala duwan yahay, oo waxaa ku jira, xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya labada dal. Adeeg hawleed toos ah oo udhaxeeya Qaahira iyo Tel Aviv waxaa maamusha shirkadda EgyptAir iyada oo lagu gabanayo "Air Sinai". Adeegga basku wuxuu umuuqdaa inuu sii socdo, sida hoos lagu sharaxay. Sikastaba xaalku ha ahaadee, u xaqiiji xaalada sida aad u qorsheysay, iyo markale daqiiqada ugu dambeysa.
Muwaadiniinta Bahrain, Guinea, South Korea, Libya, Cumaan, Saudi Arabia, Isutagga Imaaraatka Carabta iyo Yemen waxay helaan fiiso 3 bilood ah markay yimaadaan. Muwaadiniinta Kuweyt waxay heli karaan Ogolaanshaha Deganaanshaha 6-bilood markay yimaadaan. Shiinaha iyo muwaadiniinta reer Malaysia ay helaan fiiso 15 maalmood ah markay yimaadaan. Muwaadiniinta Shiinaha (kaliya Hong Kong iyo Macau SAR) ayaa laga yaabaa inay booqasho 30 maalmood ah ku joogaan fiiso la’aan.
Muwaadiniinta UK, EU, Australia, Canada, Croatia, Georgia, Japan, New Zealand, Norway, Macedonia, Republic of Korea, Ruushka, Serbia, Ukraine iyo USA sidoo kale waxay heli karaan a fiisada imaanshaha meelaha ugu waaweyn ee laga soo galo.
Fiisaha imaanshaha waa US $ 25 qof walba. Uma baahnid inaad ubaahantahay doolarka mareykanka, inta badan lacagaha waawayn, illaa qoraal yar ($ 1, € 5, £ 5), waa lagaa aqbalay oo waxaa isweydaarsaday sarkaalka aruurinaya fiisada oo ka badan heerka cadaalada. Sarkaalka ayaa sidoo kale ku dhejin doona fiisada warqad dhejiska ah baasaboorkaaga, kaas oo ay tahay inaad uga gudubto kantaroolka baasaboorka. Warqadda istiikarka ah ayaa aad u dabacsan: haddii aad dareento inay ku sugan tahay goob khaldan ama aad qaadanayso boos badan, waxaad u wareejin kartaa meel ku habboon, ama ku dhuuman kartaa shaabad aad rabto inaad ku qariso sababo jira awgood.
E-fiisooyinka: Laga bilaabo Ogosto 2018, shirkado badani waxay bixiyaan fiisooyin elektaroonig ah iyagoo adeegsanaya websaydhyo u eg degello rasmi ah, oo leh magacyo dhawaaqa rasmiga ah sida "egyptvisa.com". Waxay kugu soo dallacayaan lacag aad uga badan intii aad ku bixin lahayd fiisaha imaatinka ah (tusaale, US $ 90 halkii laga bixin lahaa US $ 25). Waxaa jira cabashooyin ah inaysan xitaa bixin karin fiisooyinka elektaroonigga ah ka dib markay lacag kaa qaadaan.
Masar waxay leedahay dhowr garoon diyaaradeed oo caalami ah:
Madaarka Caalamiga ah ee Qaahira. Gegada diyaaraduhu waa barta koowaad ee laga soo galo iyo xudunta shirkadda duulimaadka qaranka, Egyptair.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Borg el. Dhammaan duulimaadyada aada Alexandria waxay hadda isticmaalaan garoonkan.
Madaarka Caalamiga ah ee Hurghada. Maalmahan, garoon diyaaradeed oo weyn oo loogu talagalay dalxiisayaasha miisaaniyadeed ee imanaya Masar oo sii joogaya Badda Cas inta badan. Duulimaadyo badan oo aada Hurghada waa la dalban karaa iyadoon la bixin xirmada fasaxa.
Madaarka Caalamiga ah ee Sharm el Sheikh. Sida Hurghada, oo si wanaagsan loo booqdo iyo mid ka mid ah xulashooyinka ugu jaban ee lagu galo Masar.
Madaarka Caalamiga ah ee Luxor. Garoonkan ayaa hada waxaa ku soo kordhaya duulimaadyo caalami ah oo qorshaysan, inta badana ka imanaya Yurub, marka lagu daro duulimaadyada kiraynta.
Madaarka Caalamiga ah ee Aswan.
Madaarka Caalamiga ah ee Marsa Alam.
Doomaha markabku waxay si joogto ah uga socdaan Aqaba una gudbaan Nuweiba oo ku taal gacanka Siinay, iyagoo dhaafaya Israa’iil iyo qabanqaabada xuduudaha mararka qaarkood. Guud ahaan ma jiraan wax fiiso fiiso ah oo laga galo gelitaanka Urdun ee loo maro Aqaba maadaama ay qayb ka tahay aagga ganacsiga xorta ah. Qadka ilaa Nuweiba waxaa ku shaqeeya AB Badda. Sidoo kale waa suuragal in laga safro Saudi Arabia illaa dhowr dekedood oo xeebta badda cas ah.
Doon todobaadle ah ayaa sidoo kale mareysa inta udhaxeysa Wadi Halfa, Suudaan iyo Aswan, oo ku xirta tareenka ka imanaya Khartuum.
Ma jiraan doonyo rakaab oo jadwal u qorsheysan oo u dhexeeya Yurub iyo Masar. Kuwa ujeedkoodu yahay inay abuuraan qaabkii caadiga ahaa ee lagu gaari lahaa Masar, safarka xamuulka ayaa wali ah ikhtiyaar.
Tabaalka xadka Taba, ee xadka ay la wadaagaan Israel
Ku safridda Masar basas ayaa ah ikhtiyaar ka raqiisan duulimaadyada gaagaaban ee ka yimaada dalalka deriska ah. Safarka u dhexeeya Jordan iyo Qaahira wuxuu ku kici karaa ugu yaraan US $ 45 (€ 35). Diidmada, dabcan, waa inay waqti qaadaneyso, xitaa haddii basaska maalmahan ay leeyihiin kuraas dheeri ah iyo hawo-qabad, aad ayey u xun tahay maadaama aad ku egtahay kursi illaa 40 saac. Sidoo kale, shisheeyaha baska ku galaya Masar waa inay bixiyaan canshuurta LE63 (lacagta Masar).
Israel ayaa ah dalka ugu caansan ee basaska looga raaco iyadoo dadka safarka ah ay si fudud basaska uga soo galaan Masar iyagoo ka tagaya Jerusalem iyo Tel Aviv. Si kastaba ha noqotee ma jiraan adeegyo xudduud ka gudbaya. Wadada ugu caansan waa inaad bas u raacdo Eilat halkaas oo aad uga gudbi karto xadka Taba oo aad bas u raacdo Qaahira ama Siinaay. Guud ahaan, kaliya labo ama seddex bas ayaa Taba uga taga maalin kasta meelaha kala duwan; hal subax iyo galab adeeg, oo goor fiid hore laga tago waqti ka waqti. Qorshee imaatinka Eilat si waafaqsan, oo u diyaar garow inaad ku hoydo Eilat ama Taba midkood haddii aad soo daahdo. Sidii caadiga ahayd, markii aad baska ugu gudubto Israa’iil waxay la macno tahay in baasaboorkaaga lagu shaabadeeyo oo dalal badan oo Carab ahi kuu diidaan inaad gasho (akhri dhibaatada Visa).
Wadooyinka kale ee loo maro Qaahira waxaa kamid ah; adeegyada tooska ah ee Amman usbuucii laba jeer shirkadda basaska ee gobolka Jordan, JETT. Waxaa jira adeeg maalinle ah SAPTCO ka Dammam, Jeddah iyo Riyadh in Saudi Arabia. Waxa kale oo jira basas ka imanaya Benghazi, in kasta oo ay u joogsan karaan xaaladda ammaanka dareeraha ee halkaas awgeed. Waqtiyada safarka dhammaan goobahan loo safrayo waxay u dhexeeyaan 25 ilaa 40 saacadood.
Safarada dhulka ee u dhexeeya magaalooyinka Masar badanaa waa kuwo dhaadheer, kulul, kacsan, boodh leh, oo aan gebi ahaanba ammaan ahayn. Waxaa jira shabakad hawada sare oo wanaagsan, iyo qiimaha horay loo qaado ma ahan mid qaali ah, sidaa darteed duulimaadyada gudaha badiyaa waa ikhtiyaar wanaagsan. Waxyaabaha ka reeban ayaa ah Qaahira - Alexandria iyo Luxor - Aswan, labaduba waxay kaliya u jiraan 220 km sidaa darteed gaadiidka dhulka wuu dhakhso badan yahay, waxaadna kaliya ku kala duuli laheyd dhexdooda si aad ugula xiriirto duulimaad kale oo gudaha ama caalami ah.
Qaahira waxay leedahay duullimaadyo toos ah magaalo kasta oo kale oo waaweyn, oo ay ku jiraan Luxor, Aswan, Abu Simbel, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Alexandria, Marsa Matruh, Marsa Alam iyo Kharga oasis. Kuwani waxay socdaan ugu yaraan maalin kasta, magaalooyinka waaweynna waxay leeyihiin dhowr duulimaad maalintii. Waxa kale oo jira duullimaadyo maalinle ah oo toos uga kala goosha magaalooyinka Alexandria, Aswan, Luxor, Hurghada iyo Sharm el-Sheikh.
Duulimaadyada badankood waxaa wada shirkadda diyaaradaha ee EgyptAir. Tani waa meesha ugu horeysa ee la raadinayo. Qaar ka mid ah baraha internetka (sida Expedia) ma bixiyaan duullimaadyadooda - waxay umuuqataa inaad u baahan tahay inaad ku duulto Istanbul ama wax aan jirin. Haddii aadan haysan internet, Egyptair ma iibiso taleefannada, laakiin waxay leeyihiin xafiisyo badan oo ballansasho ah oo ku yaal magaalada - hudheelkaagu wuu tilmaami karaa.
Waxaa jira diyaarado iska soo horjeeda sida Nile Air iyo Al Masria. Shirkadda Nile Air waxay leedahay duulimaadyo ka kala socda Qaahira iyo Alexandria. Al Masria wuxuu u duulaa Qaahira isagoo ka socda Hurghada, iyo Sharm El Sheikh. Duulimaadyada baakadaha shisheeye (tusaale. TUI) mararka qaarkood waxay duulaan waddo gudaha ah, laakiin taasi waa inay macaamiishooda ku wareejiyaan fasaxyo Xarumo badan leh, oo aysan diyaar u ahayn inay ballansadaan duullimaadyo gudaha-dhibic-dhibic ah.
Tareen ugu raac Masar
Shabakada tareenka ee Masar
Tareenka weyn ee Masar wuxuu raacaa wabiga Niil: laga bilaabo Aswan waqooyi ilaa Luxor ilaa Qaahira iyo Alexandria. Khadadka laamuhu waxay maraan guud ahaan wabiga Niil, ilaa bariga Suez iyo Port Said, iyo galbeedka dhanka xeebta ilaa El Alamein illaa iyo Mersa Matruh. Tareenku waa hab fiican oo loogu safro Qaahira iyo Alexandria, iyo inta u dhexeysa Luxor iyo Aswan, iyadoo adeegyo badan oo maalinle ah ay qaataan 2-3 saacadood. Tareenadu waxay kaloo maraan inta u dhaxeysa Qaahira iyo Luxor iyo Aswan, maalin iyo habeenba. Ma jiraan tareenno taga meelaha loo dalxiis tago ee Badda Cas ama Siwa oasis.
Ku dhowaad dhammaan tareennada waxaa maamula shirkadda ay dowladdu leedahay Tareennada Qaranka ee Masar (ENR) (marka laga reebo Qaahira-Luxor-Aswan oo seexiya oo ay maamusho Watania, hoos ayaa lagu sharaxay). Tareenka dheereeya waxay leeyihiin fasalo hawo qaboojiye ah oo loo yaqaan AC1 iyo AC2 (fasalka 1aad iyo 2aad). Iyagu waa nadiif oo waa raaxo. Wixii tareenada caadiga ah fasallada AC1 iyo AC2 sidoo kale waa la heli karaa, iyadoo A / C mararka qaarkood laga helo AC1, laakiin aan waligeed laga helin AC2. Qiimaha ayaa aad u jaban marka loo eego heerarka Reer Galbeedka, xitaa tikidhada ugu qaalisan ee Qaahira-Alexandria kaliya waxay ku saabsan tahay LE51 (Oktoobar 2018). Waa kala bar in tareenada tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, Waqtiga oo la ilaaliyo waxaa lagu tilmaami karaa “uma xuma Masar”: tareenadu guud ahaan waxay ka baxaan saldhiga ugu horeeya waqtigooda laakiin dib u dhac ayey ku yimaadaan wadada. Dib udhaca ilaa saacad ma ahan wax aan caadi ahayn, gaar ahaan inta udhaxeysa Qaahira iyo Luxor. Marka, haddii tareenkaagu ka imanayo meel kale, ha filan inuu ku ahaado waqtiga.
Intaa waxaa dheer, tareenada heerka 3aad ee deegaanka waa hab fiican oo lagu sahamin karo soojiidashada aagga ku xeeran. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa masaafo dheer haddii aad rabto inaad la xiriirto dadka deegaanka oo aad ku jirto miisaaniyad adag. Fasalka 3aad wuxuu u muuqdaa mid ka xun sida dhabta uu yahay-kuraasta waa alwaax laakiin gudaha mararka qaar si fiican ayaa loo rinjiyeeyaa. Iyagu waa wasakh raqiis ah, LE1.50-4 oo ah 50 km, laakiin hubi inaad haysato qoraalo yar yar ama qadaadiic la heli karo-xitaa warqad LE5 ah ayaa dhibaato noqon karta. Jadwalka tareenka maxalliga ah lagama heli karo khadka tooska ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad su'aalo ku weydiiso saldhigga. Ku adkow, waxay kaliya kuu sheegi karaan jadwalka tareenka caadiga ah ee aad horay uga ogayd bogga ENR, adoo rajaynaya inaadan rabin inaad adeegsato wax dhaafsiisan AC2 ama xitaa dhaafsiisan AC1. Sidoo kale, macluumaadka mararka qaar way adkaan kartaa in la xaqiijiyo; Waqtigee, kee madal, istaagaa. Waxaa fiican inaad weydiiso dhowr qof / sarkaal oo aad ogaato waxay leeyihiin. Ama fiiri sabuuradda bixitaanka saldhigga maalin ama wax ka hor safarkaagii aad damacsanayd, fursadaha ayaa ah tareenno isku waqti isku maalin maalin wada socda. Tareenada maxalliga ah qaarkood way buuxsami karaan, laakiin inta badan oo keliya kuwa safarka fog gala.
Safarka shisheeyaha waxaa lagu soo rogi karaa xannibaadyo xagga amniga ah, laakiin (horaantii 2018) ma jirin xayiraad dhab ah. Haddii laguu sheego in tareenku uusan soconayn, waxaa laga yaabaa inay fududahay rajada, tusaale ahaan saldhigga shaqsiyeed, ama inaan laga dalban karin khadka tooska ah, tusaale ahaan karraaniga socdaalka.
Habka ugu wanaagsan ee tikidhada loogu iibsado tareenka degdegga ah waa khadka tooska ah, laga bilaabo, ENR. Tani wax lacag ah oo dheeri ah kuma soo kordhineyso, waxay damaanad qaadeysaa kursigaaga waxayna keydineysaa dhibaato badan saldhigyada ama xafiisyada ballansashada. Waxyaabaha ay ka kooban tahay boggu waa Ingiriis iyo Carabi. Marka hore iska diiwaangeli goobta, ka dib iibsigu waa mid cakiran laakiin toos ah. Tigidhada ayaa la iibinayaa 2 todobaad ka hor bixitaankooda - badanaa waa la heli karaa maalinta bixitaanka, laakiin tareenadu way ballansan karaan waqtiyada mashquulka badan. Boggu wuxuu kaliya buuggayaa muujinta, ie fasalka 1aad iyo 2aad, iyo kaliya magaalooyinka waaweyn. Waxaad u baahan doontaa inaad fayl gareyso faahfaahinta baasaboorka dhammaan socotada kooxdaada. Barta 'ENR' waxay aqbashaa bixinta inta badan kaararka deynta iyo debit-ka. Haddii aadan tikidhadaada isla markiiba daabacan karin, hubso inaad diiwaangeliso lambarka xaqiijinta si aad dib ugala soo bixi karto goor dambe - ENR kuma soo dirto xaqiijin iimayl ah. (Daabacaadda muuqaalka muuqaalka ayaa ugufiican, maxaa yeelay sawirka ayaa laga yaabaa inuu soo saaro lambarka xaqiijinta.) Faahfaahinta ugu muhiimsan ee xaqiijinta waxay ku qoran tahay Ingiriisiga, iyadoo weligood la qoro far Carabi yar. Websaydhada kale, iyo xafiisyada wakiilada safarka, waxay si fudud kuu iibin doonaan waxa laga heli karo ENR ama Watania waxayna kaa qaadi doonaan lacag dheeraad ah markaad sidaas sameyso.
Haddii kale, saf ayaad ka geli kartaa saldhigga — hubi inaad hiigsaneyso daaqadda saxda ah, oo kala sooco lacagtaada marka hore si aad uga fogaato soo bandhigidda boorsada iyo baasaboorka. Ama waxaad raaci kartaa tikit la'aan waxaadna lacag siin kartaa kirishbooyga tareenka. Waxaa jira lacag dheeri ah oo LE6 ah tan, iyo amniga barxadda uma muuqdo mid caqli gal ah haddii aadan tikidh haysan, xitaa kuwa muujiya ee loo malaynayo inay kaliya boos celis yihiin.
Mashiinnada tikidhada is-adeegga ee saldhigyada waaweyn waxay ku bixiyaan adeegyo Carabi iyo Ingiriisi ah. Haddii mashiinku kuu sheego in "Safarka [aan] la heli karin", isku day daaqada tigidhada - weli waxaad tikidhada ka heli kartaa halkaas (Oktoobar 2018).
Iibso tikidhada horay, tan iyo waqtiyada safarka ugu sareeya, tareenada si buuxda ayaa loo dalban karaa, gaar ahaan kuwa qaaliga ah. Marka laga reebo xilliyada fasaxa mashquulka ah, maahan caadi ahaan adag tahay in la iibsado tikidhada maalinta safarka ama maalinta ka horreysa. Si looga fogaado dhibaatooyinka, ballanso inta ugu macquulsan.
The adeegga hurdada Qaahira-Luxor-Aswan waxaa maamula Watania, shirkad gaar loo leeyahay. Tigidhada kaga iibso khadka tooska ah iyaga, maadaama ENR aysan ku tusin adeegyadaas jadwalkooda isla markaana aysan iibin tikidhada.
Masar waxay leedahay shabakad balaaran oo basaska dhaadheer, oo ay inta badan ka shaqeeyaan shirkadaha ay dowladdu leedahay. Shirkadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah Baska Bedouin, Pullman, Galbeedka Delta, Arrow Golden, Diyaarad Super, Delta Delta, El Gouna, Bas raac iyo Sare Egypt Bus Co.. Wadooyinka caanka ah waxaa ka shaqeeya in ka badan hal shirkad. Shirkadaha basaska qaarkood waxay kuu oggolaadaan inaad horay u sii qabsato kuraasta; qaar baa iibiya baro iyagoo ku saleynaya helitaanka kuraasta. Tigidhada khadka tooska ah waxaa laga heli karaa shirkadaha qaarkood sidoo kale.
Ka taxaddar inaad tikidhada ka iibsato touts baska wadada ama banaanka hoteelkaaga. Shirkadaha yar yar mararka qaarkood ma ahan sharciyeysan waxayna gooyn karaan nabadgelyo. Waxaa jiray sideed shil bas oo halis ah oo ay kujiraan dad ajaanib ah tan iyo bishii Janaayo 2006, halkaas oo ay ku dhinteen in kabadan 100 qof. Haddii aad tahay qof rakaab ah oo ku socda xawaare aan xasilooneyn waa inaad si adag ugu sheegtaa darawalka inuu yareeyo.
Shilalka waddooyinka ayaa aad ugu badan dalka Masar, inta badan waxaa sabab u ah waddooyinka oo xun, darawalnimada oo qatar ah iyo ku-dhaqan-la’aanta sharciyada taraafikada. Booliska ayaa qiyaasaya in shilalka waddooyinka ay ku dhintaan in ka badan 6,000 oo qof dalka Masar sannad kasta. Tani waa laba jeer tirada UK. Qiyaaso kale ayaa tirada sii fogeeyay.
Magaalooyinka waawayn, gaar ahaan Qaahira, jidadka waaweyni waxay badanaa noqdaan kuwo saxmad badan waqtiga ugu sarreysa taasna waxay labanlaabi kartaa waqtiga loo baahan yahay si loo gaadho halkaad rabto.
Magaalooyinka, tagaasida ayaa ah hab raqiis ah oo ku habboon oo lagu kala wareego. In kasta oo guud ahaan ay ammaan yihiin, tagaasida ayaa si khaldan u wada wada wadayaasha kale, gaar ahaan Qaahira, mararka qaarna tagaasida been abuurka ah ayaa ku wareegta. Hubso inay ku leeyihiin calaamado rasmi ah dashboardka ama meelaha kale; tagaasida marwalba waxaa lagu rinjiyeeyaa midabbo gaar ah si loo aqoonsado, maadaama tagaasida ay saaran tahay gaariga dushiisa. Qaahira tagaasida oo dhami waa cadaan (dhif iyo naadirba xayaysiis dhinac ah), kuwaa ayaa laga door bidaa maadama ay haystaan ​​miiska dijitaalka ah inay kuu sheegaan inta la bixinayo mana aha inaad bixiso wax ka badan inta mitirku kuu sheegayo, waad u sheegi kartaa darawalka ka hor inaad bixin doonto oo kaliya waxa mitirku muujiyo. Tagaasida kale ee duugga ah waa madow iyo caddaan, waxaa sidoo kale jira cabsida Qaahira oo dhif ah, dhammaantoodna waa jaalle, sidoo kale mitirka. Luxor waxay kala yihiin buluug iyo cadaan, Alexandria-na waa jaalle iyo madow. Qaahira iyo Luxor badanaa waa wax aad u xiiso badan in la isticmaalo taksiyada iyo buug hagayaal wanaagsan halkii aad ku dhex mari lahayd bas safar.
Waxay umuuqataa, Qaahira inay kali ku tahay Masar iyadoo leh dad aad u tiro badan oo cabsida mitir casri ah. Laga soo bilaabo Jan 2009, Sharm El Sheikh tagaasida garoonka oo dhami waxay leeyihiin mitir lagu rakibay waana in la adeegsadaa. Guud ahaan habka ugu wanaagsan ayaa ah inaad weydiisato hudheelkaaga ama qof aad taqaanid oo ka yimid Masar qiimayaasha min dhibic ilaa dhibic. Waxaad kaloo weydiin kartaa qof lugeynaya ama booliis qiimaha saxda ah. Sida ugu fiican ee taksi loo kiraysto waa in la istaago wadada dhinaceeda oo gacanta la saaro. Wax dhib ah kuma lahaan doontid soo jiidashada taksi, gaar ahaan haddii aad tahay qof reer galbeed ah. Guud ahaan waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato taksiyada cad ee isticmaala mitirka maxaa yeelay taksiyada madow iyo cadaan badanaa waxay kujiraan hakad dhamaadka safarka, darawallada taksi ee qaarkooda ma bilaabaan mitirka ilaa aad adigu ka codsato mooyee, haddii ay dhahaan mitirku waa jabay waxaa fiican inaad weydiisato darawalka inuu ku dejiyo intaadan fogaan. Waa muhiim in xoogaa isbadal ah adiga (labo shan iyo toban) maxaa yeelay wadayaasha qaar waxay dhahaan ma heysto wax isbadal ah si ay lacagta ugula baxaan.
Haddii aad raaceyso taksi madow iyo caddaan kala xaajoodaan qiimaha iyo halka aad u socotaan intaadan gaariga fuulin. Dhamaadka safarka, ka deg gaariga oo hubi inaad haysato wax walba kahor intaadan darawalka siinin lacagta. Haddii darawalku qayliyo, waa macquul inuu caadi yahay, laakiin haddii uu gaariga ka baxo waxaad hubaal tahay inaad bixisay waxyar. Siciradu way is bedbeddeli karaan laakiin tusaalooyinka waa LE20 laga soo bilaabo bartamaha Qaahira ilaa Giza, LE10 safar loogu jiro gudaha bartamaha Qaahira iyo LE5 oo lagu boodboodo magaalada dhexdeeda. Dadka deegaanku waxay bixiyaan wax kayar qiimayaashan tagaasida aan mitirka lahayn; qiimaha maxaliga ah ee tagaasida ka timaada Giza ama Bartamaha Qaahira ilaa garoonka diyaaradaha waa LE25-30. Ha isku dayin inaad wax badan siiso xaalada dhaqaale awgeed; haddii kale, ka takhalusida ajaanibta waxay noqoneysaa mid caan ah oo sidaas lagu sameeyo guud ahaan waxay ku sii kordheysaa sicir bararka. Qiimaha halkan ku taxan ayaa durba wax yar laga beddelay heerka laga filayo dalxiisayaasha, ee maahan waxa ay Masriyiintu sida caadiga ah bixin lahaayeen. Waxaad sidoo kale kireysan kartaa taksi maalmaha oo dhan, LE100-200 haddii aad u socoto safarro dhaadheer sida Saqqara iyo Dashur oo Qaahira ka socda. Gudaha magaalada gudaheeda iyaguna way ku faraxsan yihiin inay adiga ku sugaan (badanaa lacag yar oo dheeraad ah, laakiin weydii darawalka), xitaa haddii aad warwareegayso dhawr saacadood.
Wadayaasha tagaasida badanaa waxay ku hadlaan Ingiriis ku filan si ay ugala xaajoodaan qiimaha iyo halka loo socdo, laakiin marar dhif ah ayaa ka badan. Qaarkood waxay u hadlaan si ka yar ama ka yar si habsami leh waxayna labanlaabmi doonaan hagayaal ahaan, iyagoo ku dhawaaqaya meelaha muhiimka ah markaad baabuur ku wadato, laakiin way adkaan karaan in la helo. Wadayaasha baabuurtu waxay inta badan filayaan in lacag yar oo dheeri ah laga siin doono taas; si kastaba ha noqotee, ha dareemin baahida loo qabo bixinta adeegyada aanad weydiisan. Haddii aad hesho darawal wanaagsan oo ku hadla Ingiriisiga, waxaad u baahan kartaa inaad weydiisato kaar ama lambar taleefan, maxaa yeelay inta badan waa la heli karaa wakhti kasta oo waxaad heli doontaa khibrad safar oo lagu kalsoonaan karo.
Qad cusub oo tagaasida ah oo ay leeyihiin shirkado gaar loo leeyahay ayaa lagu soo bandhigay magaalada Qaahira. Dhammaantood waa nadiif oo hawo-qaboojiye. Darawalada ayaa si rasmi ah u lebisan waxayna ku hadli karaan ugu yaraan hal luqad qalaad, badiyaa Ingiriis. Tagaasidaan ayaa u muuqda midabka jaalaha ah ee dhalaalaya awgiis. Waxaa lagu ammaani karaa waddada haddii ay xor yihiin ama laga kiraysto mid ka mid ah meelaha ay istaagaan (oo ay ku jirto mid ku taal barxadda Taxriir ee Bartamaha Magaalada). Tagaasidaan cusub waxay adeegsadaan mitirro hadda jira kuwaas oo lagu xisaabiyo kiiloomitir, oo ka bilowda LE2.50. Guud ahaan, waxay aad uga yar yihiin taksiyada caadiga ah; waxaad wici kartaa 16516, laba saacadood ka hor, Qaahira si aad u kiraysato taksi.
Haddii aadan rabin inay ku dhibayaan kolonyada booliska, u sheeg booliiska meelaha laga soo galo inaad ka shaqeyso Masar. Waxay ku dalban doonaan baasaboorkaaga laakiin dhab ahaan intooda badani ma aqrin karaan waraaqaha Roomaanka oo waxna ma aqoonsan karaan. Kolonyada booliisku waa u caqli celin maskaxeed dalxiisayaasha halkii ay ka ahaan lahaayeen ilaalin dhab ah-waxay soo jiidanaysaa dareen ka badan marka aad isticmaaleyso taksi maxalli ah
Gaari-wadid adeegyada - Careem iyo Uber - waxaa laga heli karaa Qaahira, Alexandria iyo Hurghada, oo meelo kale ayey ku sii fidayaan. Kuwani waxay siiyaan dadka safarka ah beddel fudud oo tagaasida ah maadaama barnaamijku u tarjumayo meelaha laga tago ee Ingiriisiga iyo Carabiga ah, waana la goynayaa qiimaha. Waxay si ballaaran u isticmaalaan Masaarida.
Gaaska waa mid qaali ka ah Masar, qiimayaasha si aad ah ayaa loo kabaa: LE6.25 halkii litir ee bisha Maarso 2017. Haddii aad go'aansato inaad kireysato gaari, wax weyn kuma kordhin doontid kharashka gaaska. Goobaha kirada baabuurtu waxay kaa rabaan inaad ugu yaraan 21 jir noqotid. Ku kaxaynta Masar aad ayey uga duwan tahay tan waddamada reer Galbeedka mana aha wadnaha daallan; mooyee inaad runtii ubaahantahay ikhtiyaarkan waa sida ugu fudud uguna raqiisan inaad ku tagto tagsi iyo wadanka oo dhan diyaarad, tareen ama bas. Sidaad arki doonto waxyar kadib imaatinka, adeecida sharciyada taraafikada ayaa hooseysa waxaana jira calaamado aad uyar oo tilmaamaya xeerarka wadooyinka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad bartilmaameed u noqotid bilayska Masar oo doonaya laaluush, kuwaas oo soo qaadan doona waxoogaa dambi ah oo yar oo aad gashay oo runtiina aadan ka fogaan karin.
Sidoo kale akhri ogeysiiska dhamaadka cutubka taksi ee ugu dambeeya ee iska dhigaya inuu ka shaqeynayo Masar si looga fogaado safarka kolonyada.
Saddex sadar metro ayaa u adeegta Qaahira Weyn, fiiri Qaahira # Wareeg.
Doontii ka gudubtay Badda Cas ee u dhaxeysa Hurghada iyo Sharm el-Sheikh ayaa la joojiyay sanadkii 2010, mana jiraan wax dib u bilaabid ah oo la filayo.
Waxyaabaha muhiimka ah ee booqasho kasta oo lagu tago Masar waxaa ka mid ah goobaha caanka ah ee qadiimiga ah ee ka soo jeeda Masar (Waqooyiga) iyo Sare (Koonfurta) Masar. Kuwa ugu caansan waa:
Ahraamyada Giza iyo Sphinx
Casaan, Bent iyo Ahraamta Madow ee Dahshur, waa la dayacay laakiin beddel weyn ayey u tahay Giza oo leh haramka ugu da'da weyn ee la yaqaan
Qasriga Salax El Diin iyo Masjidka Maxamed Cali
Khaan al Khalili bazaar iyo masjidka al Hussein
Ahraamyada iyo macbudyada Saqqara, oo woqooyiga woqooyi ka xigta Dahshur
Memphis, oo ay ku jiraan waxyaabo ka mid ah waxyaabihii hore ee Masar - oo ay ku jiraan taallada weyn ee Ramesses II, oo ka soo baxaysa sawirkii dhiirrigeliyay gabaygii Percy Bysshe Shelley Ozymandias
Alexandria waa soojiidashada ugu weyn ee xagaaga ee Masaarida ka carara kuleylka xagaaga oo raadiya meel ay ku qaataan fasax. Magaalada waxay leedahay aragtiyo badan oo Roomaan iyo Giriig ah:
muuqaalka cusub ee Bibliotheca Alexandrina
Dhismayaasha Gumaysiga iyo Roomaanka
Qasr El Montaza (Qasriga El Montaza),
Aswaan oo ku teedsan wabiga Niil
Aswan waa bedel weyn oo ku saabsan dhibaatada iyo xad-dhaafka Luxor. Halkan, waxaad si siman u arki kartaa macbudyo cajaa'ib leh iyo taalooyin qadiimi ah, laakiin isla markaa nasto oo ku raaxee sogga saxda ah iyo kan weyn, iyo:
Qabuuraha gobta, oo muuqaal fiican ka leh Aswan iyo sawirro qurxoon oo qabriyada gudahooda ah.
Abu Simbel, oo u dhow xadka ay la wadaagaan Suudaan harada Nasser, waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan Masar marka laga reebo Ahraamta.
Geziret El Nabatat (Jasiiradda dhirta), oo ah jasiirad ku taal webiga Niil ee Aswan oo lagu beeray noocyo dhif ah oo dhir ah, geedo iyo ubaxyo ah.
Waxaa laga yaabaa in howlaha ugu caansan ee ka socda Luxor iyo Aswan ay tahay in lagu sameeyo markabka Nile Cruise markab u dhexeeya labadaba. Waxay kuu suurta gelinaysaa inaad joogsato goob kasta oo ku teedsan webiga Niil halkaas oo aad ka arki karto dhammaan dhismayaasha taariikhiga ah ee caanka ah, oo ay ku jiraan Kom Ombo oo la dayacay, iyo sidoo kale inaad waayo-aragnimo u leedahay webiga Niil oo ay ku jirto doon huteel shan xiddigle ah.
Macbadka Karnak iyo Luxor
Daanta Galbeed oo leh Dooxada Boqortooyada, Medinat Habu iyo Macbadka Hatshepsut
Sidoo kale ha seegin:
Xeebaha Badda Cas ee gacanka Siinay, oo ay ku jiraan Dahab, Hurghada, iyo Sharm el-Sheikh, oo leh qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee quusin adduunka.
Aragtida gacanka Sinai, oo ay ku jiraan Saint Catherine's Monastery iyo Mount Sinai.
Saxaraha galbeed iyo aagagga, oo ay ku jiraan Siwa,
Waxa lagu sameeyo Masar
Wax badan ayaa loo qabanayaa socdaalka ajnabiga ah ee jooga Masar. Marka laga reebo booqashada iyo aragtida macbudyada qadiimiga ah iyo waxyaabihii qadiimiga ahaa ee Masar hore, sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo lagu arko magaalo kasta. Xaqiiqdii, magaalo kasta oo Masar ka mid ah waxay leedahay soo jiidasho u gaar ah oo ay ku aragto taariikhdeeda, dhaqankeeda, waxqabadkeeda, iyo dadka inta badan ku kala duwan dabeecadda kuwa ka soo jeeda qaybaha kale ee Masar.
Qaahira, tusaale ahaan wax badan baa la qabtaa oo la arkaa. Marka laga soo tago taariikhda qadiimiga ah ee Masaarida, waxaa jira taariikhda Roomaaniyiinta, Griigga, Boqortooyada Byzantine, boqortooyadii Islaamka, Cusmaaniyiinta, iyo ugu dambeyn taariikhda casriga ah ee Masar.
Astaanta Coptic ee Kaniisadda Saint Mercurius ee Qaahira ku taal
Taariikhda Yuhuudda iyo Masiixiyiinta Si aad wax badan uga ogaato taariikhda masiixiga iyo ta Yuhuudda ee Masar, u tag xafiiska dalxiiska ee maxalliga ah kana codso inay ku siiyaan magacyada kaniisadaha maxalliga ah iyo sunagogyada. Waxa jira ugu yaraan laba sunagog oo taariikh ahaan jiray sannado badan ka hor, markii Masar ay ku noolaayeen dhawr boqol oo kun oo Yuhuud ah oo waddanka jooga, oo aakhirkii ka tegey xilligii la aasaasay Israa’iil.
Waxaa jira kaniisado badan oo duug ah oo xiiso leh oo lagu arko aagag kala duwan oo Qaahira ah, oo ay ku jiraan bartamaha magaalada Qaahira, Heliopolis, Korba, Shubra, Abbasiya, Zamalek, iyo Maadi. Qaar ka mid ah kaniisadahaani waxay soo jireen dhowr boqol oo sano dhismeedkooduna wuxuu la mid yahay kaniisadaha ku yaal wadamada reer galbeedka, badanaa waxaa dhisay reer Yurub oo dhisay dhisme badan oo magaalada ah qarnigii 19aad oo la mid ah dhismayaasha casriga ah ee Yurub waqtigaas.
Qaahira Casriga ah Haddii aad rabto inaad aragto Qaahira casriga ah, isku day inaad ku lugeeysid waddooyinka Zamalek, Maadi, Mohandiseen, ama Heliopolis halkaas oo aad ku arki doontid qaar ka mid ah dhismayaasha casriga ah oo aad ku baran karto habka nolosha Masar.
Makhaayadaha, makhaayadaha laga shaaheeyo iyo makhaayadaha Waqtiyada bulshada, isku day inaad fadhiisato mid ka mid ah maqaayadaha makhaayadaha ee aad ku kulmi karto kulana xiriiri karto walaalaha reer Masar. Waxaa jira makhaayado badan oo laga shaaheeyo / makhaayado iyo makhaayado ku yaal dhammaan Qaahira oo dhan oo loogu talagalay cunnooyinka kala duwan iyo sooyaal kala duwan waxayna u dhexeeyaan miisaaniyadda illaa tan ugu qaalisan.
Silsiladaha maxalliga ah waxaa ka mid ah Coas Roastery, Cilantro, Grand Cafe, iyo Costa Coffee. Guud ahaan aag kasta oo Qaahira ka mid ah waxay leedahay makhaayado iyo makhaayado.
Hawlaha lamadegaanka Waxyaabaha kale ee xiisaha leh, isku day inaad aado Degmada Xaraam ee Qaahira, oo raadso xeryo fardo fuushan. Halkaas, waxaad ku kireysan kartaa faras saacado yar oo aad fuushan kartaa, ama xitaa raaci kartaa geel aad cidlada kaga aasan tahay Ahraamta iyo Sphinx. Waqtiga ugu fiican ee tan la sameyn karaa waa habeenkii oo aad arki karto dhammaan xiddigaha oo si wadajir ah u ifaya cirka isla markaana qabta dareenka sixirka ah ee meesha ka jira. Waxaad la joogi doontaa hage maxalli ah oo kugu raacaya faras kale ama awr kale, ama xitaa waxaad ku biiri kartaa koox shakhsiyaad kale ama kooxo asxaab ah oo ku raaxeysta raacista fardaha lamadegaanka iyaga oo kale ah.
Felucca webiga Niil
Doonta Niil: Isku day inaad kireysato doon Feluca ah (doon yar oo qaadi kara ilaa 20 qof) wabiga Niil ee Qaahira. Halkaas waxaad ka dheehan kartaa quruxda Niil iyo muuqaalka ku xeeran, halkaas oo aad ka arki karto magaalada iyo dhismaheeda iyo jidadkeeda biyaha hareerahooda. Waxay kuxirantahay cimilada, waxaad sameyn kartaa midkood maalin ama habeen, laakiin waxaad ubaahantahay inaad aadeyso Dagmada Giza oo aad lugeeysid agagaarka masarka webiga Niil oo aad weydiisato mid ka mid ah dadka deegaanka inuu kireysto doontaan.
Qaahira Islamic / Fatimid Qaahira: Kuwa xiiseynaya qaab dhismeedka Islaamka iyo taariikhda, iskuday inaad aadeyso Qaahira Islamic (el Gamalaya district) ama Khan El Khalili. Halkaas waxaad ku arki doontaa dhismayaal tiro badan iyo xoogaa masaajido ah oo waxaad arki doontaa sida dhismayaal iyo guryo loogu dhisay waagii Islaamka ee Masar. Waxa kale oo jira Souk ama (Bazar) oo aad ka iibsan karto waxyaabo badan oo xusuus iyo alaabooyin kala duwan ah.
Iskandariya: Tan iyo markii Alexandria la aasaasay sanadkii 332/31 BC oo uu qoray Alexander the Great "luulkii badda Mediterranean" waxay ka mid ahayd meelaha ugu waaweyn taariikhda Masaarida. Dhimashadii boqorkii Macedonia ka dib magaaladii waxay ku horumartay Ptolemies hooyadii xaruntii aqooneed iyo dhaqan ee adduunka Hellenistic-ka oo dhan. Aqoonyahano waaweyni waxay ku noolaayeen kana shaqeeyeen Museion
Afka hooyo ee looga hadlo dalka intiisa badan iyo kan qaran luuqadda Faransiiska waa Carabi Masaari ah.
Luqadda rasmiga ah ee Masar waa Carabi Heer Caan ah. Waxaa lagu dhigaa iskuullada oo sidaas ayey ku fahmaan qof walba. Carabiga caadiga ahi waa Carabiga loo adeegsado inta badan qoraal ahaan iyo qaabab rasmi ah sida telefishanka, wargeysyada, khudbadaha dawladda, macallimiinta iyo goobaha waxbarashada. Carabiga Masaarida waa mid ka mid ah lahjadaha maxalliga ah ee tirada badan (inta badan aan la fahmi karin) ee Carabiga.
Inta badan dadka aqoonta leh waxay ku bartaan Ingiriisiga iskuulka. Lagama yaabo inaad la kulanto dhibaatooyin helitaanka qof ku hadla Ingiriisiga. Jiilalkii hore ayaa sidoo kale awooda inay ku hadlaan Faransiis sidoo kale.
Luuqadaha kale sida Jarmalka, Talyaaniga, Isbaanishka iyo Ruushka ayaa laga yaabaa inay ku hadlaan hagayaasha dalxiisyada, sababtoo ah tirada dalxiisayaasha badan ee ka yimaada Yurub ee ku hadla luqadahaas.
Adoo raacaya qawaaniinta caadiga ah ee edab, halkii aad si fudud wadahadal ula bilaabi laheyd qof Ingiriis ah, weydii "Ma ku hadashaa Ingiriisiga?". Dhamaan fiicnaanta haddii aad ku sameyn kartid Carabi Masaari ah: betetkallem engelīzi? (wax ka qabashada lab) ama betetkallemi engelīzi? (adoo la hadlaya haweeney).
Qaybaha koonfureed ee dalka, sida Luxor iyo Aswan, luuqada maxaliga ahi waa Saciid Carabi, waxayna ka duwan tahay magaalooyinka waaweyn ee Masar ee Carabiga ah ee lagaga hadlo waqooyiga dalka.
Dadka Siwa iyo saxaraha galbeed ee Masar waxay ku hadlaan luqad la yiraahdo Siwi (luqad Berber ah), oo ah luuqad aan la qorin oo iyaga u gaar ah.
Qabiilooyinka Baadiyaha (inta badan dadka asalka ah ee Siinay) ee degaannada kale ee Masar waxay leeyihiin lahjad u gaar ah oo Carabi ah, taas oo aan sida caadiga ah fahmi karin Masaarida caadiga ah ee reer magaalku.
Qoraalkii hore ee Masar ee Fircoonnadii, Hieroglyphics, cidna ma fahmi karto marka laga reebo kuwa bartay Masar-ka ama ka shaqeeya qaybta qadiimiga ah ama hagayaasha dalxiiska matxafka.
100 Pound lacagta Masar
Lacagta maxalliga ah waa lacagta Masaarida (ISO code: EGP), oo loo qaybiyay 100 baastar. Lacagta badanaa waxaa loo qoraa LE (oo loo soo gaabiyo Faransiis livre égyptienne, ama adoo adeegsanaya calaamada pound oo leh ama aan lahayn xarfo dheeri ah: E £ iyo £ E. Carabi ahaan, pound ayaa loo yaqaan genē [màSri] / geni [màSri] (جنيه [مصرى]), oo asal ahaan laga soo qaatay Ingiriisiga "guinea", iyo piastres (pt) waxaa loo yaqaan ciil (قرش). Wikivoyage wuxuu u adeegsadaa qoraalka "LE" isku dheelitirnaanta, laakiin filo inaad ku aragto ogeysiisyo kala duwan dukaamada iyo ganacsiyada kale.
Qadaadiic: Diimaha waa 25pt, 50pt iyo 1 rodol. Runtii uma baahnid inaad ogaato magaca taarikada, sida qiimaha ugu yar ee wareega ilaa 2014 uu yahay 25 baastar, tanna waxaa had iyo jeer loo yaqaan "rubuc rodol" (rob` genē ربع جنيه), iyo kontonka baastar, "badh rodol" (noSS genē نص جنيه).
Lacagta waraaqaha: Madaahibta lacag-bixinta waa 25 iyo 50 baastar; 1, 5, 10, 20, 50, 100 iyo 200 rodol.
Masar gudaheeda, Pound Steriga waxaa loogu yeeraa, genē esterlīni (جنيه استرلينى).
Pound-ka Masar ayaa si tartiib tartiib ah u qiimeynayey dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay. Sanadihii kontomeeyadii iyo lixdameeyadii, lacagta Masaarida waxaa lagu qiimeeyaa ku dhowaad midkii Pound-kii Ingiriiska. Laga soo bilaabo 1950, sarrifku wuxuu noqday mid aan xasilloonayn oo sicir bararku wuu kordhay. 1960-dii Noofambar, 2011, bangiga dhexe wuxuu go’aansaday inuu hoos u dhigo lacagta Masar ee loo yaqaan sarifka lacagaha oo la mid ah tan suuqa madow.
Isdhaafsiga lacagaha iyo bangiyada
Bangiyada iyo xafiisyada sarrifka ama cid kasta oo sarifleeysa, ayaa inyar oo dheeri ah kaa qaadi doonta qiimaha sarrifka rasmiga ah. Lacagaha qalaad waxaa lagu kala beddeli karaa xafiisyada sarrifka ama bangiyada, sidaa darteed looma baahna in loo leexdo sarrifleyaasha waddooyinka dhifka ah. Hotelo badan oo heer sare ah ayaa ku kacaya doolar Mareykan ah ama yuuro waxayna si farxad leh u aqbali doonaan lacag ahaan, inta badanna waxay ku helayaan qiimo aad u sareeya oo ka badan lacagta Masar. ATM-yada ayaa meel walba ku yaal magaalooyinka waana laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarka ugu fiican; badiyaa waxay bixiyaan sicirka ugufiican bangiyada badan ee shisheeyana waxay laamo ku leeyihiin Masar. Kuwaas waxaa ka mid ah Barclay's Bank, HSBC, CitiBank, NSGB, BNP Paribas, Piraeus Bank, CIB, iyo bangiyada kale ee maxalliga ah iyo kuwa Carabta. Saacadaha bangigu waa Axadda ilaa Khamiista, 8:30 AM-2PM.
Qoraallada been abuurka ah ama duugoobay ma ahan mushkilad weyn, laakiin beddelka rodol ee dalka dibadiisa ayaa dhib noqon kara. American Express, Diners Club, MasterCard iyo Visa waa la aqbalaa, laakiin kaliya hudheelada waaweyn ama maqaayadaha ku yaal Qaahira iyo maqaayadaha ku yaal meelaha dalxiiska ayaa si fudud u aqbali doona kaararka deynta sidii lacag ahaan. Jeegaga socdaalka waxaa lagu beddeli karaa bangi kasta, laakiin waqti ayey qaadan kartaa.
Kahor intaadan ka bixin Masar, xitaa haddii aad u safreyso dalalka deriska la ah Bariga Dhexe, u beddel lacagtaada euro, rodol Ingiriis ama US dollars. Sariflayaasha wadamada kale waxay ku siin doonaan 30% ilaa 50% halkii Pound ee Masar marka loo eego qiimaha aad ka heli doonto Masar, haddii ay aqbalaan gabi ahaanba lacagta Masar. U beddelashada iyo ka soo deynta doolarka Mareykanka, yuuro ama lacagta Ingiriiska ayaa leh faafitaan yar, sidaa darteed waxaad waayi doontaa boqolkiiba uun.
90% dadka ka shaqeeya warshadaha adeegga / martigelinta waxay isku dayaan inay ka dhigaan isha ugu weyn ee ay ka helaan nolosha iyagoo ka tagaya talooyinka. Uma baahnid inaad bixiso talooyin waaweyn sida badanaa qoraallada ugu yar la qadariyo. Si kastaba ha noqotee, maahan inaad calaamadeyso haddii aad dareento inaadan helin wax adeeg ah ama caawinaad ah ama haddii aad dareento in adeeggu xun yahay. Qofna weligiis dembi kama qaadi doono ama ixtiraamdarro hadeydaan iyaga gacan siin.
Inta badan musqulaha dadweynaha waa shaqaale, booqdayaashana waxaa laga filayaa inay u sheegaan adeegaha. Qaar ka mid ah dadka musqusha ka shaqeeya, gaar ahaan goobaha dalxiiska, waxay ku qasbanaan doonaan warqadda musqusha iyagoo ku saleynaya caarada ay helaan. Ajaanibta ayaa laga yaabaa inay si gaar ah ugu nugul yihiin tan, in kasta oo qaar ka mid ah dadka maxalliga ahi ay weydiistaan ​​ama dalbadaan talooyin, badiyaaaba lama hubo.
Ma jiro sharci waxa loo arko inuu mudan yahay, sidaas darteed qofku waa inuu diyaar u ahaadaa inuu dhiibo rodol ama laba masar haddii ay dhacdo, inuu isticmaalo musqul, tusaale ahaan. Adeegyada sida hageyaasha dalxiisyada ama turjubaanada, guud ahaan 20% ama ka badan ayaa la filayaa. Wadayaasha tagaasida waxay bixiyaan adeeg salka ku haya qiimayaasha la isku raacay halkii ay ka ahaan lahaayeen nidaamka mitirka ujeedada badan ee laga isticmaalo wadamada kale, sidaa darteed talo bixin lama filaayo marka la adeegsanaayo adeegga taksiga, in kasta oo talooyinka la aqbali karo haddii la bixiyo. Talooyinka ayaa laga filayaa makhaayadaha, waxayna u dhexeeyaan dhowr rodol ilaa 15%.
Haddii aad weydiisato qof aanad garanaynin tilmaamaha, talooyinka looma baahna oo xitaa waxaa loo qaadan karaa mid gaf ah. Saraakiisha ku labisan dharka ciidanka, sida saraakiisha booliska, waa in aan la taaban. Xusuusnow in laaluushku yahay sharci darro, laakiin waxay u badan tahay inaan waxba kugu dhici doonin. La soco inaad tahay dalxiis shisheeye, in dad badani kuu arkaan lacag fudud oo ay habboon tahay ma naftaada ha laguugu cadaadiyo inaad ka faa'iideysato "adeegyo" aan loo baahnayn ama aan laga codsanaynin sida hagaha dalxiis ee is-magacaabay ee kugu soo dhacaya.
Qaar ka mid ah tilmaamaha guud
Shaqaalaha musqusha: LE3
Garsooro: LE30 / maalintii, oo loo qaybiyo dhammaan shaqaalaha saaran doonta
Guide: LE40 / maalin
Huteelka bellman: LE10 dhammaan boorsooyinka
Huteelka albaabka: LE10 ee adeegyada la qabtay (sida calaamadeynta tagaasida)
maqaayadoMakhaayadaha quruxda badan, khidmadda adeegga (10-12%) ayaa lagu darayaa biilasha, laakiin cajalad 5-10% ah dusheeda waa wax caadi ah. Meelaha cuntada degdegga ah lagu qaato, timaha laguma ganaaxo looma baahna
Taksiilayaasha: looma baahna gaar ahaan haddii aad horay u oggolaatay qiimaha, oo aan ka badnayn 10% ee qiimaha mitirka ah
Ilaaliyayaasha goobta: LE5 haddii ay sameeyaan wax waxtar leh, midna si kale uma hayaan
Wadayaasha dalxiiska: LE10 / maalin
Ka adeegashada Masar
Souq ee Luxor
Masar waa janada wax iibsade, gaar ahaan haddii aad xiisaynayso waxyaabaha xusuusta leh ee Masar iyo kitsch. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira tiro badeecooyin tayo sare leh oo iib ah, inta badanna qiimo jaban. Qaar ka mid ah iibsiyada ugu caansan waxaa ka mid ah:
Alabaster Weelasha Alabaster-ka, tirooyinka, iwm ayaa caan ka ah Masar oo dhan.
qadiimiga (FG: maahan waxyaalo qadiim ah, ganacsigooduna uu sharci daro ka yahay Masar)
Roogaga iyo roogaga
Alaabta suufka ah iyo dharka Waxaa laga iibsan karaa Khan El Khalili illaa LE30-40. Dharka cudbiga ah ee Masaarida oo ka tayo wanaagsan waxaa laga iibsan karaa dukaamo silsilado kala duwan leh oo ay ka mid yihiin Mobaco Cottons iyo Concrete oo leh laamo fara badan dalka oo dhan. Dharka ayaa qaali ugu ah Masar (qiyaastii LE180-200 oo shaati ah) laakiin waa ku jaban yihiin heerarka reer galbeedka ee la siiyay tayada.
Alaabada la soo galiyay, sida looxyada gadaal
Waxyaalaha la isku qurxiyo Kartootooyinka ayaa sameeya xusuus weyn. Kuwani waa taargo bir ah oo u eg sida oval dherer ah waxayna ku xardhan yihiin magacaaga hieroglyphics
Kohl budo Masaarida dhabta ah kohl qurxinta indhaha (isha-safka) waxaa laga iibsan karaa dukaamo badan qiimo yar. Waa budo madow, oo qiyaas ahaan qaadada shaaha ah, oo guud ahaan lagu iibiyo baakad yar ama weel alwaax lagu xardhay waxaana guud ahaan loo isticmaalaa si deeqsinimo leh wax la mid ah burushka cufan / balastar qafiif ah ee baalasha gudaha ee isha isla markaana tilmaamaya isha. Aad bay u riwaayad badan tahay, wax yarna waxay u socotaa waddo aad u dheer Cleopatra ayaa isheeda qurxin lahayd iyada oo la dhigo iyadoo dhulka la dhigayo qofna uu ku ridayo malqacad yar oo budada ah il kasta. Markay ishu jeexjeexday, qurxinta ayaa si wanaagsan indhaha ugu qaybin doonta indhahana kala socon doonta dhinacyada, iyadoo abuuri doonta muuqaal caadi ah. Si kastaba ha noqotee, iska jir in badankood ay ku jiraan maadada loo yaqaan 'sulphide lead', taas oo ah walaac caafimaad. Weydiiso kohl aan lahayn sunta rasaasta.
Fudud (taageere; pl. fawanīs) Siraaddo bir ah oo si adag loo jarjaray oo la shaabadeeyey, oo badanaa leh daaqado midabbo kala duwan leh, ayaa qaban doona shumaca wax lagu doorto oo qaab ah.
caw (bardi) Si kastaba ha noqotee, papyrus-yada badankood ee aad arki doontid wuxuu ka sameysan yahay cawsduur nooc kale ah, oo aan ahayn "papyrus", oo aad u yar. Ogow waxaad iibsanaysid, haddii aad danaynaysid farqiga u dhexeeya, oo aad u rogtid sicirka si waafaqsan. Haddii shaki ku jiro, u qaad inay tahay papyrus aan sax ahayn oo laguugu deeqayo.
cadar - Cadarrada waxaa laga iibsan karaa inta badan dukaamada xusuusta. Hubso inaad weydiisatid iibiyaha inuu kuu caddeeyo inuusan jirin aalkolo lagu qaso cadarka. Heerarka caadiga waa inay kujiraan heerka LE1-2 gram kasta.
Tuubooyinka biyaha (shīsha)
Kalluunka (tawābel) - waxaa laga iibsan karaa meheradaha midabada badan leh ee suuqyada Masaarida badankood. Dhirta qalalan iyo xawaashku guud ahaan waxay ka tayo sarreeyaan kuwa laga heli karo dukaamada waaweyn ee reer galbeedka waana shanaad illaa rubuc qiimaha, in kasta oo qiimaha ugu dambeeya uu ku xirnaan doono gorgortanka iyo xaaladaha maxalliga ah.
Marka aad wax ka adeeganayso suuqyada ama aad la macaamilayso waratada waddooyinka, xusuusnow inaad gorgortan gasho. Tani waa qayb ka mid ah ciyaarta iibka ee labada dhinacba laga filayo inay ku lug yeeshaan.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa noocyo badan oo reer galbeed ah hareerahaaga oo dhan. Waxaa jira suuqyo badan oo Masar ku yaal, kuwa ugu caansan waa Suuqa Citystars, oo ah Xarunta Madadaalada ugu weyn Bariga Dhexe iyo Afrika. Waxaad ka heli doontaa dhammaan makhaayadaha cuntada degdegga ah ee aad rabto sida McDonald's, KFC, Hardees, iyo Pizza Hut, iyo noocyada dharka sida Morgan, Calvin Klein, Levi's, Facconable, Givenchy, iyo Esprit.
Masar gudaheeda, qiimaha badanaa waxaa lagu kordhiyaa ajaanibta, markaa haddii aad ku aragto qiimo sicir qaali ah, waxaa macquul ah inaad barato maxalliga ah Tirooyinka Carabiga Bari:
Waxay ka qoran yihiin bidix ilaa midig. Tusaale ahaan, lambarka (15) waxaa loo qori lahaa (١٥).
Dukaamaysiga Masar wuxuu u dhexeeyaa alaabooyin iyo badeecooyin matala xusuusta taariikhda hore ee Masar iyo waliba waxyaabaha casriga ah. Kuwaas waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka mid yihiin Ahraamta yar yar, obelisks iyo taallo xusuus ah oo laga iibsan karo goobo dalxiis oo badan sida Khan El Khalili iyo Islamic Cairo.
Goobaha casriga ah ee laga dukaameysto, City Stars, City Center iyo Nile City, waxaa lagu iibiyaa noocyo naqshadeeyayaal ah sida Guess, Calvin Klein, Armani iyo Hugo Boss.
Masar waxay noqon kartaa meel aad u fiican oo lagu soo qaato noocyo kala duwan oo cunto ah: oo aan aad u basbaasnayn oo aan si fiican ugu dhadhan lahayn dhirta. Xulashada habboon ee cunnooyinka Masaarida iyo cuntooyinka daruuriga ah iskuday silsiladda Felfela ee maqaayadaha Qaahira. Si kastaba ha noqotee, martida qaarkood waxay ka cawdaan, hase yeeshe, in kuwani ay noqdeen kuwo dalxiis u roon oo ay ka tageen waxyaabo qaarkood oo xaqiiq ah. Beddelka ka raqiisan uguna ballaadhan ayaa ah silsiladda makhaayadda Arabiata, Arabiata ayaa dadka deegaanku u haystaan ​​inay tahay meesha ugu horreysa ee loo tago cuntooyinka macaan ee Masaarida falafel iyo fūl sidoo kale.
Iska jir makhaayad kasta oo ku taxan buugaagta tilmaamaha caanka ah iyo websaydhada. Xitaa haddii makhaayadu mar wanaagsanayd, daabacaadda ka dib, waxay u badan tahay inay abuuri doonaan "qaas" menu Ingiriis ah oo ay ku jiraan aad qiimaha sare.
Sida dalal badan oo badaha ka mid ah, Masar waxaa ka buuxa maqaaxiyo kalluun iyo suuqyo sidaa darteed kalluunka iyo cunnada badda waa in la isku dayo. Marar badan, suuqyada kalluunka waxay ku yaalliin xoogaa xero cunto ah oo u dhow halkaasoo aad ku tilmaami karto noocyada kalluunka ee gaarka ah in la kariyo. Dukaammadu caadi ahaan waxay leeyihiin miisas wadaag ah, dadka maxalliguna way ku badan yihiin halkaas sida dalxiisayaasha.
La soco in nadaafadda laga yaabo inaysan ahayn heerarka ugu sarreeya, iyadoo kuxiran meesha. Tirada dalxiisayaasha ka cabanaya nooc ka mid ah dulin ama infekshinka bakteeriyada ayaa aad u badan. In kasta oo ballan-qaadyo looga soo horjeedo, jimicsi caqli gal oo keen daawooyin habboon oo dhibaatooyinka lagula tacaalo. "Antinal" (Nifuroxazide), jeermiska jeermiska xiidmaha, waa mid rakhiis ah, wax ku ool ah oo laga heli karo farmashiye kasta. "Immodium" ama alaabooyin la mid ah waa dawooyinka dhakhtarku qoro oo keliya.
In kasta oo Antinal ay waxtar badan leedahay, mararka qaarkood markay wax kale jirin, dadka waayeelka ah waa inay ka hubiyaan magaca calaamadda dhakhtarkooda ka hor intaanay ku tiirsanayn maadaama ay ku jirto uruurinta firfircoon ee sare ee maaddada aan oggolaanayn Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ama sharciyeynta Ingiriiska. jirka dawooyinka.
Dadka rajaynaya inay Masar sii joogaan in ka badan 2-3 toddobaad waa inay taxaddar ka muujiyaan isticmaalka Antinal, maxaa yeelay waxay caqabad ku noqonaysaa awooddooda inay helaan difaac ka dhan ah bakteeriyada maxalliga ah iyo ka dhigista shuban-biyoodka socdaalka inuu noqdo dhibaato soo noqnoqota.
Cunnooyin badan oo maxalli ah ayaa u hoggaansamaya khudradda ama khudradda, taas oo ah shaqo ka timaadda qiimaha sare ee hilibka ee Masar iyo saameynta diinta kiristaanka ee loo yaqaan 'Coptic Christianity' (oo maalmaheeda soonka badan ay dalbadaan cunno vegan).
Cunnooyinka Masaarida ee Cunnada: Saxanka daawooyinka waa mid ka mid ah suxuunta ugu caansan ee Masaarida; waxay ka kooban tahay digir fava (fūl) Si gaabis ah loogu kariyey dheriga naxaasta ah (noocyada kale ee dheriyo bir ah ma soo saaraan nooca dhadhanka saxda ah) ee qayb ahaan ama gebi ahaanba la shiiday. daawooyinka waxaa lagu siiyaa Kuminiin, saliidda cuntada, ikhtiyaar ahaan leh dhir la jarjaray, basal, toon, liin dhanaan iyo basbaas kulul, oo sida caadiga ah lagu cuno Masar (baladi) rootiga ama mararka qaarkood Levantine (shii) pita.
Mid waa inuu isku dayaa midka caadiga ah falfal taas oo ah kubbadaha digirta fava ee la shiilay (laakiin si fiican looga yaqaan adduunka oo dhan nooca digaagga sida caadiga ah laga helo cunnooyinka kale ee gobolka Bariga Dhexe) oo la rumaysan yahay inay soo hindiseen reer baadiyaha Masar. Badanaa waxaa loo adeegaa sidii cunto dhakhso ah, ama cunto fudud.
koshari waa saxan caan ah, oo inta badan isugu jira makarooni, misir, bariis iyo digaag, lagu kariyey maraqa yaanyo iyo basasha la shiilay. Aad caan uga ah dadka deegaanka waana in la isku dayaa dalxiisayaasha. Kala duwanaan la'aanta ayaa loo yaqaan Taan.
Intaa waxaa sii dheer, hummus, cunno ku saleysan digaag, oo sidoo kale ku baahsan Bariga Dhexe.
kofta (kubbadaha hilibka) iyo kebab sidoo kale waa caan.
Cunnooyinka Masaarida waxay aad ugu egyihiin cunnooyinka waddamada Bariga Dhexe. Cunnooyinka sida khudaarta cufan iyo caleemaha canabka ah iyo sanduuqa shaashadaha leh ayaa caan ku ah Masar iyo gobolka.
Masar waa mid ka mid ah wadamada ugu jaban ee Yurubiyan ah si ay isugu dayaan noocyo kala duwan oo miraha qalaad oo cusub. Guava, cambe, qaraha iyo mooska dhammaantood waxaa si ballaaran looga heli karaa meelaha miraha lagu iibiyo, gaar ahaan suuqyada dalxiis ee dalxiisyaashu u jeedaan.
Biyaha dhalada ku jira ayaa si ballaaran loo heli karaa. Noocyada maxalliga ah (kuwa ugu badan ayaa ah Baraka, Hayat, Siwa ) waa isku qiimo sida xulashooyinka noocyada shisheeyaha oo iyana la heli karo: Nestle Life daahir, Dasani (waxaa dhalada ku leh Coca-Cola), iyo Aquafina (dhalada ku shubtay Pepsi) Evian waa yar tahay helitaankiisuna waa qaali. In kasta oo ammaan la cabbo qaar baa laga yaabaa inay helaan sumadda deegaanka, Baraka, wuxuu leeyahay dhadham aad u yar oo ah soodhada ka dib dhadhanka, sababtoo ah macdanta sare ee ay ka hesho ilaha biyaha ceelka qoto dheer.
Meel kastoo aad ka iibsato biyaha dhalada ku jira (xitaa hudheelada si buuxda looguma kalsoonaan karo), ka hor intaadan aqbalin, hubi inuu ku jiro shaabad caag ah oo cad oo giraanta qoorta ay wali ku xiran tahay daboolka xargaha jilicsan ee balaastigga ah. Waa wax caadi ah in la soo ururiyo dhalooyin madhan laakiin cusub oo lagu buuxiyo biyo tuubbo ah oo dhalada cabitaankiisu ay kugu keeni karto xanuun. Dhammaan noocyadu ma wada yeeshaan dabool caag ah laakiin kuwa wanaagsan oo dhan ayaa leh.
Nabdoonaanta biyaha dhalada ku jira
Waa muhiim inaadan iibsan noocyo aan caadi aheyn, maadaama laga yaabo inaysan badbaado u aheyn cabitaanka. Sannadkii 2012 Wasaaradda Caafimaadka ayaa amar ku bixisay in astaamaha biyaha dhalooyinka ah ee soo socda laga qaado khaanadaha: Alpha, Hadir, Seway, Aqua Delta, Tiba, Aqua Mina iyo Aqua Soteir.
Laga soo bilaabo 2013, qaar ka mid ah kuwii hore waa la shatiyeeyay, laakiin Wasaaradda Caafimaadka ayaa ka digtay astaamo kale oo aan sharciyeysnayn:
liisan aan sharciyeysnayn, sumado aan ammaan ahayn: (Safa, el Waha, Ganna, Sahari, Nolosha, el Wadi, Zamzam ).
Sannadkii 2013, Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay inay jiraan oo keliya 17 nooc oo ruqsad haysta oo badbaado u leh in la cabo. Kuwani waa:
17 nooc oo amaan ah oo ruqsad haysta: (Hayah, Safi, Aqua Siwa ,Siwa, Aman Siwa, Organica, Nahl, Aqua Sky, Mineral, Vira, Nestlé, Minibar (Alcohol removed), Halal Food can be ordered from nearby Halal Restaurants. eHalal shall provide a detailed list of Halal restaurants near the propertyaka, Alpha, Aquafina, Tiba, Aqua Delta, Dasani, Aqua Paris ).
Noocyada ruqsadaha haysta, dadka deegaanka waxay caadi ahaan kula taliyaan dalxiisayaasha inay iska ilaaliyaan Baraka haddii ay suurogal tahay, maadaama ay ka kooban tahay uruur badan oo milix ah oo leh dhadhan aan fiicnayn.
Sida meelo kale oo ka mid ah Waqooyiga Afrika, shaaha reexaanta sidoo kale waa xulasho
Casiirka si ballaaran ayaa looga heli karaa Masar - àSab (bakoorad sonkor ah; قصب); khamrigaerk sūs  عرق سوس); sobya (casiir cad; سوبيا); tamaar (taariikho macaan; تمر) iyo xoogaa casiir khudradeed ah (ku dhowaad isla dukaankaas oo laga helo dhammaan noocyada casiirka ah marka laga reebo qamriga ayaa laga yaabaa inaad ka heli karto meelo kale).
Hibiscus, oo deegaanka looga yaqaan karkadē (كركديه) ama ennāb (عناب), sidoo kale waa casiir caan ah gaar ahaan Luxor oo lagu cabo kuleyl ama qabow laakiin Masar waxaa laga doorbiday in lagu cabo qabow.
Hibiscus iyo liquorice waa in aan si xad dhaaf ah loo wada cunin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaysan amaan u aheyn kuwa qaba cadaadiska dhiigga oo hooseeya ama dhiig karka. Hibiscus ayaa yareyn kara cadaadiska dhiigga, halka cabitaanka liquorice-ka uu kicin karo cadaadiska dhiigga.
Halkee lagu joogayaa Masar
Masar waxay leedahay xulashooyin hoy oo buuxa oo kaladuwan, laga bilaabo hoteelada boorsooyinka aasaasiga ah ilaa shan dalxiis. Inta badan silsiladaha hudheellada waaweyn waxaa lagu metelaa Greater Cairo, Sharm el-Sheikh iyo Luxor, ugu yaraan. Inta badan hoygaaga waad kuheysankartaa khadka tooska ah ama waxaad laxiriiri kartaa wakiilka deegaanka kaasoo abaabuli kara hoy iyo safar labadaba.
Heerarka socod-ku-socodka ayaa ku siinaya qiimo-dhimis ballaaran marka loo eego boos celinta khadka tooska ah, tusaale ahaan kala bar qiimaha Aswan. Guud ahaan, Boos celinta khadka tooska ah ayaa ka qaalisan sababtoo ah waxaa isticmaalay dad badan oo soo booqday. Si kastaba ha noqotee, Masar badankood hudheelada ma laha degel u gaar ah mana ahan inay ku qasban yihiin inay heshiis la galaan goobaha boos celinta ee internetka si ay ugu bixiyaan qiimo isku mid ah kan khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, hayso shaashadda qiimaha dhabta ah ee khadka tooska ah ee diyaarka ah, haddii ay dhacdo inaad la kulanto hudheel diyaar u ah inuu kaa badiyo. Xilliga sare, waxaa ugu wanaagsan in la xafido habeenka ugu horeeya oo la haggaareeyo habeenada soo socda. Haddii kale, haddii aysan jirin qolal guud oo ka yar 60% ayaa la xareeyaa (oo badanaa lagu soo bandhigo dusha sare ee goobaha lagu keydiyo internetka), ka dib fiiri aag leh hudheelo badan oo halkaas u tag oo weydiiso hareeraha. Huteeladu sidoo kale waxay si farxad leh u aqbali doonaan inaad kansashayso boos celinta khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee horey uga jiray khadka tooska ah ee internetka. Markaad kaydsanayso khadka tooska ah, badiyaa waxaad leedahay sicir fidsan, oo cashuurta iyo khidmadaha lagu daro. Guud ahaan, waxaad heli doontaa ugu yaraan canshuurahan iyo khidmadahaan oo ah qiimo dhimis (10-15%) markaad kansasho boos celinta shaqsi ahaan iyo / ama markaad gorgortameyso.
Qaar ka mid ah hudheelada internetka ee internetka ayaa sheegaya in lacag bixinta looga baahan yahay lacagta Masar ee sharciga ah. Si kastaba ha noqotee, hudheelada intooda badani waxay aqbali doonaan lacagta Masaarida iyada oo inta badan caddaalad looga beddelayo sicirka internetka lagu sheegay
Masar waxay ku siin kartaa fursado wanaagsan barashada luqadda Carabiga, iyo sidoo kale taariikhda.
The Jaamacadda Mareykanka ee Qaahira (AUC), waa iskuulka ugu fiican dalka wuxuuna bixiyaa xulashooyin shahaado, shahaado la'aan iyo iskuul xagaaga ah. Koorsooyinka caanka ah waxaa ka mid ah Luqadda Carabiga iyo Suugaanta, Farshaxanka iyo Naqshadeynta Islaamka, Taariikhda Carabta iyo Dhaqanka, iyo, dabcan, Masar.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo loogu talagalay barashada Carabi Qaahira, oo ay ku jiraan Machadka Luqadda Carabiga, Kalimat iyo Machadka Caalamiga ee Luqadda.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Masar
Isku soo wada duuboo, Masar waa dal amaan ah oo saaxiibtinimo leh in lagu safro. Haddii aadan booqan Siinay, ama aad wax ka qabto dawladda hoose ama aad u ixtiraamdarro ka muujiso diinta Islaamka, waxaad si xor ah ugu dhex wareegi kartaa Masar iyo magaalooyinkeeda iyagoon welwel badan ka qabin. Ku safridda Masar aad ayey ugu egtahay Morocco, Urdun, Palestine or Turkey.
Masaarida guud ahaan waa dad saaxiibtinimo badan — haddii aad u baahan tahay gargaar, waxay guud ahaan isku dayi doonaan inay ku caawiyaan inta ay awoodaan. Si kastaba ha noqotee, ka digtoonow khayaanooyinka iman kara gaar ahaan meelaha dalxiis ee aadka u badan.
Ragga Masriga ah ayaa ammaan u qaadi doona dumarka; Ha ka xumaan haddii ay sidan kugu sameeyaan. Ragga waa inaysan welwelin, sidoo kale; haddii ay sidan ku sameeyaan lamaanahaaga / gabadhaada, waxay noqon doontaa wax aan ka ahayn bogaadin, waxaana rajeynayaa inaysan intaas ka sii dheereyn intaas.
Haddii aad tahay qof dumar ah oo keli socod ah ama naag kale la socota, ka dig in ragga qaarkood ay ku taabtaan ama ku qabtaan meel kasta oo jidhka ka mid ah, haddii aad iyaga la xaajoonayso ama aad si fudud ugu socoto waddada. Dharka oo si suubban u lebbisan kama horjoogsan doono iyaga. Ku xanaaq iyaga markay taabtaan waxaad la kulmi doontaa maaweelo iyaga iyo wixii daawadayaal ah, rag iyo dumarba. Sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo tan waa xirashada band-guurka oo ha noqon saaxiibtinimo badan.
Argagixisanimadu waa walaac xagga amniga ah, kooxaha argagixisada ee wadankuna waxay leeyihiin rikoodh aan fiicnayn oo ah inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan dalxiisayaasha reer galbeedka iyo meelaha ay ku badan yihiin. Si kastaba ha noqotee, dhawaanahan diiradda waxay u muuqataa in yar oo ka mid ah Masiixiyiinta Coptic marka loo eego dalxiisayaasha. Ciidamada amaanka ee Masar ayaa wali ku jira heegan aad u sareeya.
Xaqiiq ahaan, kala duwanaanshaha in argagixisadu wax yeeleyso tira ahaan aad bey uyartahay weerarada badankoodna waxay ku guuleysteen kaliya dilka Masaarida, taas oo sii kordhineysa ka noqoshada inta badan dadka reer Masar ay dareemayaan xagjirnimada. Dawladdu waxay si dhab ah u qaadaa dhigtaa arrinta marka ay waxyeello u geysato xag dhaqaale iyo goobaha dalxiiska ayaa aad loo ilaaliyaa, in kasta oo heerka iyo aqoonta booliska Masar ay ka tagayaan waxyaabo badan oo la doonayo. Tusaale ahaan, haddii aad taksi ka raacdo Qaahira una aado Alexandria, waxaa lagu joojinayaa barta koontaroolka ka hor intaadan ka bixin Qaahira. Waxay mararka qaarkood ku weydiin doonaan halkaad u socoto, mararka qaarkoodna waxay kula xiriiraan barta kantaroolka ee Alexandria si loo hubiyo inaad ku gaarto meesha aad u socoto muddo cayiman. Waxaa la mid ah safarada badankood ee loo maro lamadegaanka, gaar ahaan Upper Egypt, oo laga yaabo in sida ugu wanaagsan looga fogaado sababo la xiriira xiisadaha diimeed ee sii kordhaya ee ka hooseeya dusha sare halka ay muuqato inay amaan tahay awood u leh inay qarxdo iyadoon ogeysiis daqiiqado ah la helin. Inta lagu jiro laamaha kala duwan ee baabuurkaaga, waxaa ku wahelinaya booliska deegaanka, oo kaa filan doona nooc lacag bixin ah haddii aad ku safreyso taksi ama gaari gaar loo leeyahay. Guud ahaan, way kula safri doonaan meeshaad u socoto, way sugi doonaan ilaa aad ka dhammeysid, waxayna badanaa ku hadhaan mid ka mid ah isbaarooyinka soo socda inta badan maadaama aysan heysan wax kale oo ay qabtaan iyo sababta oo ah dalxiisayaasha waxaa loo arkaa inay yihiin $ calaamado. Tusaalaha ugu fiican ee tani waa markaad ka safarto Aswan ilaa Abu Simbel si aad u booqato Macbadka Ramses II. Sarkaal booliis ah oo dalxiis hubeysan ayaa ku raacaya baska dalxiiskaaga oo ku galbinaya ilaa aad ka gaarto Abu Simbel, safarkaaga kadib, wuxuu isla baska kula raaci doonaa adiga oo ku laaban doona Aswan, markale maxaa yeelay waa qeyb ka mid ah shaqadiisa iyo dalxiisayaasha halkaas shaqo ma noqon laheyd mana jirin sabab ay ku xaqiijiyaan amniga dadkooda maxaa yeelay iyagu ma metelaan shaqsiyaad maaliyadeed iyaga.
Boolis fuulay geel ku yaal Giza
Waxaa sidoo kale jira saraakiil badan oo booliis dalxiis ah oo ku hubaysan AK47s oo fuushan awr roondeynaysa Giza plateau. Waxay halkaas u joogaan inay hubiyaan nabadgelyada dalxiisayaasha maaddaama Ahraamyadu yihiin dhejiska dhammaan waxyaabaha qadiimiga ah ee Masar, in kasta oo si aad u liidata loo dayactiray sannadihii la soo dhaafay iyada oo aan wax maalgashi ah ka imanaynin gudaha, kaliya maalgashi ka baxsan oo ay bixiyaan waddamo iyo kooxo taariikhi ah oo aan qaadi karin inaad dib u fadhiisato oo aad aragto burburka dawlada hoose ay u ogolaanayso goobahan yaabka leh inay noqdaan. Dalxiisayaasha qaar waxay u arkaa wax xiiso leh ama xitaa madadaalo leh inay sawirro la galaan saraakiishan booliska ka tirsan oo gadaal geel ah; si kastaba ha noqotee, maadaama ay dhamaantood kujiraan waajibaadka roondada, ma aha wax aan caadi ahayn inay afka kahadlaan oo aadan kaaga digaan inaadan iska ag dhigin si aad sawir ula gasho, in kasta oo wax waliba ay macquul yihiin lacag bixin
Masar daweyso dembiyada daroogada aad u daran. Ku dhimashada ciqaab ayaa u suurtagal ah kuwa lagu xukumo ka ganacsiga daroogada.
Isticmaalka aan la fasaxin wuxuu sababi karaa 10 sano oo xabsi ah, ganaax culus ama labadaba. Waxaa lagugu soo dalacayaa isticmaalka aan la fasaxin ilaa iyo inta raadadka daroogada sharci darrada ah laga helo nidaamkaaga, xitaa haddii aad caddeyn karto in lagu cunay meel ka baxsan dalka. Waxa kale oo lagugu soo oogi karaa tahriibinta haddii daroogo laga helo boorsooyin aad adigu leedahay ama qolkaaga ku yaal, xitaa haddii ayan kaa ahayn oo aan loo eegin inaad ka warqabto iyo in kale - sidaa darteed ka taxaddar hantidaada.
Xashiishadda iyo maandooriyaha kale waa la mamnuucay waxayna leeyihiin ciqaab culus. Si kastaba ha noqotee, xashiishku gaar ahaan waa caadi, xitaa Masriyiinta dhexdooda; waxaa loo arkaa ilaa xad qayb ka mid ah dhaqanka masar waxaana guud ahaan loo arkaa wax aad uga yar diidmada khamriga. Culimo badan oo Masaari ah ayaa tixgaliya makruh (waa la ogol yahay laakiin waa la diiday) halkii laga jeclaan lahaa xaaraam (mamnuuc). Dad badan oo Masaari ah oo dib ugu ceshada fikradda ah inay cabaan aalkolo ayaan ka fekerin isticmaalka xashiishka; waxaa badanaa loo adeegsadaa munaasabadaha ciida miyiga meelaha qaar ee dalka ka mid ah iyo cibaadooyin badan oo Suufiyada ah oo dalka oo dhan ah. Booliisku waxay u isticmaali karaan haysashada xashiishka marmarsiinyo ay ku xiraan oo ku garaacaan dadka, laakiin bartilmaameedyadoodu caadi ahaan waa dadka deegaanka, maahan dalxiisayaal. Ilaa iyo intaadan ka hor imaanaynin ciidamada amniga ama aadan si kale u soo jiidanaynin indhahooda, ajaanibta uma badna in lagu ciqaabayo isticmaalka gaarka ah ee xashiishka gudaha Masar.
Masar, sida Wadamada Khaliijka, ayaa dhawaanahan culeys saartay xanuun joojiye sharci ah, xitaa marka ay la socdaan warqad dhakhtar qoro oo loogu talo galay qofka socdaalka ah inuu isticmaalo. Ka hubi boggooda safaaradda liistada hadda jirta ee waxa aan la oggolayn.
Gadiidka Masar waa taxaddar la’aan iyo khatar. Fiiro gaar ah yeelo markaad goyneyso wadada.
Khiyaano iyo dhibaato
Khiyaanooyinka iyo dhibaatada ayaa ah waxa ugu badan ee ka jira Masar, gaar ahaan magaalada Luxor. Dadka soo booqda waxay inta badan ka cawdaan in la dhibay iyo isku day been abuur ah. In kasta oo xanaaqa, badankood tani ay yihiin waxyaabo qurux badan oo aan waxyeello lahayn, sida isku dayga inaad kugu jiidato papyrus ama dukaanka cadarka.
La soco in Masaariyiin badan oo wada hadal kula bilaabaya ay doonayaan lacagtaada. Caadi ahaan, waxaa ku soo booqan doona qof ku hadlaya Ingiriisiga si fiican u yaqaan, Jarmal ama Ruush kaasoo bilaabi doona wadahadal isagoo iska dhigaya mid bulshada iska yeelyeelaya. Isaga (oo had iyo jeer waxay noqon doontaa isagu) ka dib wuxuu isku dayi doonaa inuu kugu kiciyo inaad la soo gasho koob shaah ah ama wax la mid ah dukaanka xusuusta ee uu ugu jecel yahay (ugu-bixinta badan). Tani waxay sidoo kale ka dhici kartaa banaanka madxafyada iwm halka khiyaanadu isku dayi doonto inay kaa dhaadhiciso "matxafku wuu xidhan yahay" ama wax la mid ah. Haddii wax u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan oo aan run ahayn, waxay u badan tahay inay tahay. Qiimo dalab wax walba, maxaa yeelay haddii aad dhahdo "Waxaan u maleynayay inay lacag la’aan tahay" xaqiiqda ka dib waxaad ku jirtaa muran xasaasi ah.
Hassling, in kasta oo aan waligiis khatar ahayn, sidoo kale waxay noqon kartaa wax laga xumaado, gaar ahaan meelaha dalxiiska ugu weyn. Ma jirto waddo looga fogaan karo tan, laakiin edeb leh la shukran (maya mahadsanid) wax badan ayey caawisaa. Taas ka sokow, iskuday inaad ku qaadatid dhibaato adigoo dhoola cadeynaya. Haddii aad u ogolaato inaad ku dhibto qof kasta oo isku dayaya inuu wax kaa iibiyo, fasaxaaga ma noqon doono mid aad u faraxsan.
Dhibaato badan ayaa ah darawallada tagaasida ama kuwa kale ee hela khidmadda komishanka si ay kuugu hoggaamiyaan hudheellada ay doorteen, dabcan bixinta khidmadaha komishan ee marti kasta oo ay helaan. Si adag ugu istaag arintan. Haddii ay ku adkaystaan, kaliya weydii in lagaa dhigo wado ama meel u dhow meesha aad u socoto. Khayaanadan ayaa si gaar ah ugu badan wadayaasha tagaasida ee ka soo daga garoonka diyaaradaha.
Jeeb jeebka ayaa dhibaato ku ahaa waagii hore magaalooyinka waaweyn ee Masar, gaar ahaan Qaahira Weyn. Qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sidaa darteed doortay in aysan qaadan wax boorsooyin ah gabi ahaanba, taa badalkeedana ay lacagtooda ku xareeyaan jeebka jeebkooda, iyo dalxiisayaasha ayaa caqli gal ah in ay iyaguna qaataan tan. Dhanka kore, dambiyada rabshadaha waa dhif, gaar ahaan dalxiisayaasha, aadna uma badna in lagu dhaco ama lagaa dhaco. Haddii, si kastaba ha noqotee, adigu aad tahay dhibbane dembi, waxaad taageero ka heli kartaa dadka lugta ah ee maxalliga ah adoo ku qeylinaya "Harami" (Tuug) laakiin ha raacdeyn maxaa yeelay waa habka ugu fudud ee lagu lumi karo dambiilayaasha badankoodna waxay wataan mindiyo jeeb ah; haddii dembigu ka dhaco aag dalxiis waxaad heli doontaa dukaan booliis Dalxiis oo si gaar ah loogu talagalay.
Dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda Masar waxay socdeen ilaa 2011. Waa in taxaddar laga muujiyaa agagaaraha aagagga mudaaharaadka. Banaanbaxa ama / iyo jawaabta ay ciidamada amaanku ka bixiyaan waxay isu bedeli kartaa gacan ka hadal. Tuugo ayaa ka faa'iideysata jiritaan la'aanta amniga booliska ee agagaaraha iyo hareeraha banaanbaxyada. Dhacdooyin badan oo kufsi, dhac xoog ah iyo dil ajaanib ayaa la soo sheegay.
Caafimaadkaaga ku joog Masar
Hubso inaad adigu cab biyo badan: Masar waxay leedahay cimilo aad u qalalan sanadka intiisa badan, taas oo ay sii xumeyneyso heerkulka sare ee xagaaga dhamaadka sanadka, socdaalayaasha aan tirada lahayn sanad walbana waxay la kulmaan dhib iyo halista fuuq. Dareemidda harraad kuma filna inay muujiso khatarta: qaado dhalo biyo ah oo sii wad cabitaanka. Uma baahnid inaad kaadiso muddo dheer ama aad dhaafto wax aad u yar oo kaadi ah oo midab madow ah waa calaamadaha fuuqbax aan dabiici ahayn.
Masaarida tuubo biyo guud ahaan dadka deegaanka ayaa u arka amaan inay tahay, laakiin inta badan socdaalayaashu way xanuunsanayaan. Laguguma talin inaad si joogto ah u cabto, gaar ahaan khilaafaadka maxalliga ah ee xagga tayada. Biyaha macdanta dhalada ku jira si ballaaran ayaa loo heli karaa: eeg Cabbitaanka: Qaybta biyaha. Iska jir khayaanada hore ee iibiyeyaashu ay dib ugu iibiyaan dhalooyinka biyaha dhalada ku jira, iyaga oo ku buuxinaya mid kale, oo laga yaabo inay shaki ku jiraan, il. Had iyo jeer hubi in shaabadu aysan jabin kahor intaadan wax ka bixin ama ka cabin, una sheeg booliiska dalxiiska haddii aad qabato qof kasta oo waxan sameynaya.
Wax yar iska jir casiir miro, maadaama iibiyaasha qaar ay ku qasmi karaan biyo. Caanaha sidoo kale waa in si taxaddar leh loo daaweeyaa maadaama laga yaabo in aan la karin. Isku day kaliya inaad caano ka iibsato dukaamada sumcadda leh. Cabitaanada kulul sida shaaha iyo kafee waa in guud ahaan waa hagaag, biyaha lagu kariyey diyaarinta, in kasta oo ay faa'iido leedahay in laga digtoonaado baraf iyo sidoo.
Xilliga jiilaalka, qorraxdu guud ahaan waa tan ugu fudud, gaar ahaan bisha Diseembar waana tan ugu liidata waqooyiga Masar. Masar waxay leedahay cimilo lamadegaan ah, taas oo ka dhigaysa daruuro ku dhowaad aan jirin bilaha diiran, sidaa darteed filo maalmaha qorraxda ee aadka u iftiimaya gaar ahaan Juun ilaa Ogosto, iskuday inaad iska ilaaliso qorraxda tooska ah ee 9AM (10AM xagaaga) illaa 3PM (4PM ee xagaaga). Soo qaado muraayadaha indhaha oo xiro muraayad wanaagsan, si kastaba ha noqotee qorraxda qorraxdu waxay noqoneysaa mid aan waxtar yeelanaynin marka maqaarka la soo daayo dhidid. Intaa waxaa sii dheer, xirashada koofiyaddu way ku caawin kartaa.
Si looga fogaado qandaraas siinta saxda ah ee laga baqo cudurka 'schistosomiasis' dulin (sidoo kale loo yaqaan bilharzia), Ubax fidsan oo maqaarka maqaarkiisa ku daloola, ma samayn ku dabaalan webiga Niil ama ku dhiirado marin biyoodka kale ee Masar, xitaa haddii dadka deegaanku sidaas samaynayaan. Sidoo kale waa fikrad fiican inaadan ku socon cagaha qaawan doogga imika la waraabiyo sabab la mid ah.
In kasta oo cudurku qaato toddobaadyo ilaa bilo si loo muujiyo madaxiisa, haddana waxaa caqli gal ah inaad daryeel caafimaad ka raadsato gudaha haddii aad u malaynayso inaad ku soo gaadhay, maaddaama ay caadaysteen baadhitaankiisa iyo daaweyntiisa, oo ay kugu kici doonaan dinaar intii aad doolar ka heli lahayd. Calaamadaha waxaa ka mid ah qandho, shuban, calool xanuun iyo daal, taas oo ka dhigaysa cudurku mid si fudud loogu khaldami karo (waxaad dhahdaa) hargabka ama ku sumowga cuntada, laakiin ukunta flatworm-ka waxaa lagu aqoonsan karaa baaritaanka saxarada cudurkana badanaa waxaa lagu bogsiin karaa hal qadar oo Praziquantel.
Cudurka Hargabka Avian (Hargabka Shimbiraha) ee ka dillaacay Masar wuxuu horseeday 23 dhimasho dad ah tan iyo 2006. Dhimashadii ugu dambeysay waxay ahayd Diseembar 2008.
Tallaalada iyo duumada
Tallaalada soo socda ayaa guud ahaan lagula talinayaa Masar:
Dhammaan tallaalada joogtada ah oo ay ka mid yihiin: tallaalka jadeecada-qaamo-qashiir (jadeecada) (MMR), tallaalka gawracatada-tetanus-pertussis, tallaalka busbuska (busbuska), tallaalka dabaysha iyo tallaalka ifilada sannadlaha ah.
Cagaarshowga A iyo qandho xumada.
Cagaarshowga B haddii xiriir galmo, sawir qaadis / daloolin ama daweyn caafimaad la qorsheeyo.
Kaadi fuula haddii joogitaan dheer la qorsheeyo gaar ahaan haddii lagu qabto waxqabadyo bannaanka ah.
Khatar yar oo ah duumada P. vivax ayaa kajirta oo kaliya aaga Aswan ee Masar. Intaad u safreyso Aswan safarka waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan qaniinyada kaneecada.
Qiijiyeyaasha biyaha ku caba Qaahira
Halka Masar ay tahay mid xiiso leh oo qurux badan, haddana waxaa ka buuxa stress ka soo yeeraya buuq, boodh iyo dad baa ku dhibaysa. Gaar ahaan marka aan la joogin hudheelada dhammaadka sare ama gebi ahaanba aad ku tiirsan tahay dalxiisyada xirmooyinka, tani waxay burburin doontaa qalabkaaga. Sidaas darteed, waqti ka waqti ka nasan ka soo jiidashada joogtada ah, ugaarsiga iyo ugaarsiga safarka; dooro xawaare gaabis ah, kaliya hal maalin ho (ho) tel ku laabo ama ku laalay jardiinada adoo sameecadaha dhagaha ku xiran. Sidoo kale, ha iloobin dhagaha dhegaha habeenkii, maxaa yeelay badanaa waxaa jiri doona buuq xitaa habeen qoto dheer ama subax hore haddii aad u dhowdahay iskuul. Masar uma muuqato inay nasato, laakiin tani macnaheedu maahan inaadan ku qasbanayn.
Sigaarka waxaa loo oggol yahay meel kasta oo Masar ah, waxaadna si joogto ah ula kulmi doontaa dad sigaar ku cabaya tareenka, meelaha lagu nasto iyo maqaayadaha. In kasta oo ay mararka qaarkood tixgelin karaan oo ay fadhiistaan ​​meel ka fog dadka kale, badiyaa qiiqa ayaa lagu afuufaa iyadoo aan loo eegin. Nasiib darrose, wax badan oo aad ka qaban kartid ma jiraan.
Inta badan shaqaalaha Masaarida waxay filayaan talooyin kadib markay qabtaan adeeg. Tan waxaa laga filan karaa wax yar oo riixaya badhanka wiishka. Shaqaale badan ayaa xitaa ku weydiin doona inaad siiso iyaga ka hor intaadan fursad helin. Tilmaamaha caadiga ah ee adeegyada yaryar waa LE1. Yaraanta guud ee isbeddelka yar awgood, waxaa lagugu qasbi karaa inaad LE5 siiso si ay u sameyso waxyaabo fudud sida adeegsiga sariirta. Kaliya faham in taasi ay ka mid tahay dhaqanka; qiimaha caaradaasi aad ayey ugu yartahay reer galbeedka badankood laakiin waxay ka dhigtaa qayb wanaagsan oo ka mid ah dakhliga billaha ah ee Masaarida badan.
Markaad u tagto qof ama koox dad ah markii ugu horeysay, waxa ugu fiican ee la dhihi karo waa kala duwanaanshaha deegaanka ee qaabka Islaamka ee salaanta "es-salāmu-`alēku" oo macno ahaan macnaheedu yahay "nabad gelyo korkiina ha ahaato". Kani waa qaabka ugu caansan ee loo yiraahdo "hello" qofna. Waxay kaa dhex abuureysaa saaxiibtinimo adiga iyo dadka aadan aqoon, wuxuu dhisaa xiriir wanaagsan, wuxuuna caawiyaa dhisidda ixtiraam! Waxaa sidoo kale loo arkaa edeb leh in la yiraahdo tan hadaad qof u dhowaato, halkii aad wax uun ka codsan lahayd ama aad toos ula hadasho.
Noocyada kale ee salaan waxaa ka mid ah "SàbâH el khēr" ("subax wanaagsan"), "masā 'el khēr" ("fiid wanaagsan"), ama "ezzayyak" oo aan caadi ahayn oo la hadlaya lab, ama "ezzayyek" oo la hadlaya dheddig, taas oo oo macnaheedu yahay "hello" ama "sidee tahay"?
Markaad baxaysid, waxaad dhihi kartaa isla "es-salāmu-`alēku", ama si fudud "ma`a s-salāma", macno ahaan: "nabadgelyo" ama "caafimaad qab" taas oo macnaheedu yahay "nabad gelyo". Masaariyiin badan oo aqoon leh ayaa oran doonta "bye-bye" oo laga soo qaatay Ingiriisiga "nabad gelyo" ama "buh-bye" markay dadka kale ka tagayaan.
Qosol: Dadka intiisa badani way qaddariyaan dhoolla caddaynta, inta badan dadka reer Masarna way dhoolla caddeeyaan markay qof la hadlaan markii ugu horreysay Dadka aan dhoolacadeynin inta ay hadlayaan waxaa loo aqoonsan yahay isla weyni, edeb daran, gardarro badan, aan saaxiibtinimo aheyn, iwm.
Si kastaba ha noqotee, ka taxaddar inaadan noqonin saaxiibtinimo ama aad u dhoola caddeynaya, gaar ahaan haddii aad tahay haweeney la hadlaysa nin Masri ah, maxaa yeelay waxay kugu qaldi karaan inaad isku daydo inaad saaxiib la noqoto ama aad weydiisato inay ku shukaansadaan ama kugu garaacaan. Xitaa wadahadalka lab-ka-lab ah, inaad saaxiibtinimo badan tahay waxay qofka kale siin kartaa fursad uu isku dayo inuu kaaga faa'iideysto si uun ama mid kale. Had iyo jeer isticmaal caqliga saliimka ah.
Wadada mashquulka badan ee Qaahira
Masriyiintu guud ahaan waa dad muxaafid ah badankooduna waa kuwo diineed oo u labista si aad u muxaafid ah. In kasta oo ay dejinayaan shisheeyaha iyagoo aad u dhar xidhan, haddana waxaa habboon in aanad u lebbisan si daandaansi ah, haddii laga fogaado inay dadku ku eegaan. Waxaa ugufiican in la xidho surwaal, joonisyo, gaagaaban oo dhaadheer halkii laga gaabin lahaa gaagaaban maadama dalxiisayaasha kaliya ay xidhaan kuwaas. Goobaha lagu caweeyo ee casriga ah, maqaayadaha, hudheelada iyo baararka ku yaal Qaahira, Alexandria iyo meelaha kale ee dalxiiska loo tago waxaad ka heli doontaa lambarka labiska oo aad u yaraanaya. Hawlaha rasmiga ah ama bulshada iyo maqaayadaha caqliga badanaa waxay u baahan yihiin dhar caadi ah.
At Giza Pyramids iyo meelaha kale ee noocan ah inta lagu jiro bilaha xagaaga kulul, dusha gacmaha gaagaaban iyo xitaa dusha gacmo la'aantu waa u aqbali karaan dumarka (gaar ahaan markay la safrayaan koox dalxiis ah). In kasta oo ay tahay inaad sidato garbasaar ama shay si aad wax badan u daboosho intaad u safreyso ama ka imaaneyso dalxiiska. Sidoo kale, waa wax la aqbali karo dumarku inay xirtaan kabo inta lagu jiro xilliga kuleylaha, xitaa waxaad arki doontaa dumar qaar oo xijaaban oo kabo wata.
Haweenku waa inay daboolaan gacmahooda iyo lugahooda haddii ay kaligood safrayaan, uma baahnid inaad timahaaga daboosho; dumar badan oo Masiixiyiin ah ayaa si raaxo leh ugu dhex wareegaya Masar iyaga oo timahoodu dabool yihiin. In kasta oo aad ajnabi tahay, waxaad heli kartaa feejignaan badan iyadoon loo eegin waxa aad xidhato, inta badan oo ay ku jiraan dadka ku soo eegaya adiga oo ay weheliyaan xoogsheegasho afka ah oo aad isku dayi karto inaad iska indhatirto. Haweenka reer Masar, xitaa kuwa xijaabka buuxa xirta, ayaa inta badan lagu sameeyaa xadgudub xagga galmada ah, oo ay ku jiraan wicitaannada bisadaha. Waxaad ogaan kartaa in gebi ahaanba daboolida aysan wax weyn ka beddelin, marka laga hadlayo dhibaataynta, marka laga soo tago xirashada dusha sare oo leh gacmo gaaban. Marka laga hadlayo dhibaataynta, sidoo kale waa muhiim sida aad u dhaqmayso. Bixitaanka koox dad ah sidoo kale waa mid waxtar leh, waxa ugu fiican ee la sameeyona waa iska indha tirinta ragga ku siinaya dareenka aan loo baahnayn. Waxay rabaan inay xoogaa falcelin ah idinka helaan. Sidoo kale, calaamadaha ixtiraamku waa adeegsiga salaanta carabiga, "Asalamualaikum" (oo macnaheedu yahay "hello, nabadgalyo korkiina ha ahaato)), qofka kalena waa inuu ku jawaabo" Walaikumasalam "(" nabad gelyo korkiina ha ahaato) ". Taasi waxay ogeysiinaysaa qofka inaad rabto xushmad, iyo wax kale.
Sawir ha ka qaadin dadka iyaga oo aan fasax ka haysan, meelaha ay ku badan yihiin dalxiisayaashu ha la yaabin haddii talo la codsado. Sigaar cabiddu aad ayey caan u tahay sigaarkuna aad ayuu uga jaban yahay Masar.
Inta badan Masaarida waxay u muuqdaan kuwo cod dheer leh markay hadlayaan, taas oo ay wadaagaan dalalka kale ee gobolka. Iyagu ma qaylinayaan, laakiin waad ogaan doontaa farqiga u dhexeeya.
Gamal Abdul Nasser, Madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Carabta ee Masar, iyo qaar kale oo badan ayaa lagu tiriyaa halyeeyo qaran oo Masar ah; waa inaad gebi ahaanba dhahdaa wax loo arki karo inuu yahay aflagaado ama sharaf dhac isaga ku saabsan. Si taxaddar leh ugu soo dhowaada mowduucyada noocan oo kale ah oo u oggolow kuwa kale inay hagaan furitaanka dooda. Dad badan oo reer Masar ah waxay leeyihiin fasiraad kale oo ku saabsan hadalada mugdiga ku jira sida xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda.
Isgaarsiinta dalka Masar
Masar waxay leedahay adeeg taleefan oo casri ah oo macquul ah oo ay ku jiraan seddex adeeg bixiyeyaal moobiil GSM ah. Saddexda shirkadood ee bixiya taleefanka gacanta ayaa kala ah Orange, Vodafone iyo Etisalat. Xarumaha maamulaha waxay ku yaalliin Alexandria, Qaahira, Al Mansurah, Ismailia, Suez, iyo Tanta. Adeegyada wareega ayaa la bixiyaa, in kasta oo aad ka hubinaysid adeeg bixiyahaaga. Sidoo kale, waa suurtagal in la iibsado khadadka taleefanka gacanta ee dalxiiska muddada aad joogtid, taas oo inta badan ku kacda qiyaastii LE30.
Kaararka internetka ee mobilada mobilada waxaa laga gadan karaa qiyaastii LE90 halkii 2.5GB garoonka diyaaradaha ama qiyaastii LE130 8GB XNUMX magaalada ah.
Helitaanka internetka waa fududahay in la helo oo jaban, badanaana waa bilaash. Maalmahan, dukaamada qaxwaha badankood, maqaayadaha, hiwaayadaha hudheelada iyo meelo kale ayaa hadda bixiya WiFi bilaash ah. Iskuxirayaashu waxay noqon karaan kuwo aan amaan aheyn oo lala socdo, iskuday inaad u isticmaasho wakiil ama VPN sirtaada.
Dalxiiska iyo dadka deegaanka
Aad ayaan run ugu ahay Masar
Maskaxda badan ee Masaarida ee aad kula kulmi doonto dalxiis ahaan, ayaa ah ka dib markaad si taxadar la'aan ah u kaxeyso baabuur, adigoon sameynin wax safarro dheeraad ah oo aad ku nuuxnuuxsato indhaha waqtiga, darawalka dalxiisku wuxuu wali ka dalban doonaa talooyin rakaabkiisa. Meelo badan oo dalxiis ah, sida Luxor, ma muujinayaan wax dhib ah markay lacag kaa helaan. Sidaa awgeed, marwalba la soco markaad aqbasho "nimcooyin" yar, maadaama kuwani inta badan ku yimaadaan qiime aad u culus. Dabcan, habdhaqankan waxaa inta badan horseed ka ah xaaladda dhaqaalaha iyo xaqiiqda dalxiisku inuu yahay dhaliya dakhli badan oo Masriyiin badan leh. Si kastaba ha noqotee, waxay si weyn u burburin kartaa khibradaada Masar.
Marka, waxaa ugufiican in loo diyaar garoobo. Xeerarka qaarkood:
Kaliya halkaliya hal qof adeegii markiiba. Ha u oggolaan tagsiilahaaga, wiilka hoteelka, hagaha dalxiiska, iwm inay abaabulaan wax ka baxsan adeegii asalka ahaa ee lagu heshiiyey. Haddii kale, waxay had iyo jeer isku dayi doonaan inay lacag kaa helaan.
Markaad aqbasho adeeg, caddee waxa ku jira iyo waxa aan ku jirin, iyo inay jiri doonaan kharashyo dheeri ah oo ka baxsan qiimaha lagu heshiiyay.
Ha u ogolaan naftaada in lagu cabsi geliyo. Hoteello badan, dalxiisyo, iyo kuwa la mid ah ayaa lagu qiimeyn karaa khadka tooska ah; kani waa kaftankaaga, isticmaal oo si cad u istaag dhulkaaga.
Haddii aad ku jirto dalxiis oo wax aysan u socon sida ku xusan heshiiska, kala hadal hagaha safarka hortooda rakaabka kale ee dalxiiska ah, waxay u lahaan karaan si la mid ah waxayna ku jiri karaan dhinacaaga, taas oo ay u badan tahay in la tixgeliyo dhibka joogtada ah Masar.
Markaad abaabulaysid safarkaaga darawal ama hage, kaliya bixi dhamaadka. Tani waxay ku siin doontaa adiga xakameyn ballaaran waxaad bixineyso iyo inta lacag ee aad ku kala baxeyso shirkadda.
Si kastaba ha noqotee, marka aad ka baxdo deegaanka dalxiiska, dadku waa dad saaxiibtinimo badan oo waxtar leh-xitaa waxaa laga yaabaa inay lacag kugu siiyaan tikidhka tareenka haddii aadan haysan isbeddel yar oo diyaar ah. Si kastaba ha noqotee, ka bixitaanka wareegga dhibta waa adag tahay maxaa yeelay waxyaabaha ugu badan ee aad rabto inaad aragto oo aad la kulanto nasiib darro waa dalxiis.
Haddii aad tahay qof musaafir ah oo macquul ah, iskuday inaad iska ilaaliso safarro xirmo ama safarro abaabulan, xitaa safarro hal maalin ah. Iyagu waa kuwo qaali ah, qiime ahaan lacagta u liita, ma qadarinayaan baahiyahaaga, waxay leeyihiin jadwal ciriiri ah oo inta badan aan la dulqaadan karin, waxayna badanaa albaab u yihiin furfurnaan dhib iyo lacag qaadasho dheeraad ah. Meelo badan oo dalxiisyo ah ayaa dalbanaya lacag dheeri ah oo loogu talagalay geela, hagayaasha maxalliga ah, safarada doonyaha, iwm., Kuwaas oo lagu bixiyo waddada — oo u muuqda qiimo macquul ah, laakiin inta badan hagahaaga dalxiisku wuu lacag helayaa, waana labanlaab qiimihii aad bixin lahayd la'aanteed ku lug lahaanshaha hagaha Safarada kale waa safar badh iyo badh xoojin adeegsi, halkaasoo lagugu riixayo inaad aragto papyrus ama dukaamada saliida. Hadaad dacwooto, udiyaar garow hage dalxiis oo aad u xanaaqsan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagugu degdegay indhaha iyo taariikhda iyadoon waqti la helin dheefshiidka. In kasta oo socdaallada noocan oo kale ah ay ku habboonaan karaan safarrada qaarkood, kuwa kalena waxay ku arki doonaan niyad jab weyn, xanaaq iyo walaac. Haddii aad rabto inaad la kulanto Masar dhabta ah marka laga reebo dalxiisyada loo dhan yahay iyo safarada basaska, waxaa fiican inaad kireysato taksi (dad dhowr ah ama xitaa kali), tareen ku aado ama ku warwareego meel aan aad u fogeyn. Sida lagu sharaxay hoosta #Cope, guud ahaan Masar waa meel amaan ah oo sidaas lagu sameeyo.
Lambarada Carabiga ee Bariga
In kastoo, aysan suurta gal ahayn in Carabiga lagu barto hal ama dhowr safar oo Masar ah, waa caqli in la ogaado ugu yaraan tirooyinka Carabiga Bariga. Tani waxay kaa badbaadin doontaa heshiis aad u badan oo isdabamarin, waxaadna xitaa awood u yeelan doontaa inaad fuusho gaadhiga saxda ah ee tareenkaaga.
Waxaa jira dhowr fursadood oo dharka lagu dhaqi karo intaad u safreyso Masar:
Ilaa hadda sida ugu fudud, ugu ficil badan, oo aan qaali ahayn, waa inaad u diyaargarowdaa hudheelkaaga in lagu dhaqo adiga. Nidaam hore, dharka sariirta looga tago ama loo dhiibo soo dhaweynta ayaa laguugu soo celin doonaa adiga fiidka fiidki cusub ee la dhaqay lana cadaadiyey.
Iscaawisayaasha go'aansaday waxay ku sii adkeysan karaan gacmo-dhaqashada ama helitaanka mid ka mid ah dharka "daloolka darbiga" badan oo ay shaqaaluhu ku dhaqi doonaan kuna riixi doonaan dharkaaga gacanta; geedi socod xiiso leh laftiisa. Kaliya la soco in dharkaaga ay u badan tahay inuu urin doono qiiqa sigaarka markii la soo celiyo.
Qaahira waxay leedahay xoogaa dharka aasaasiga ah ee reer Galbeedka oo dharka lagu dhaqo meelaha ay ajaanibta iyo dalxiisayaashu degan yihiin, laakiin kama jiraan meelo kale oo dalka ka mid ah. Hoteelada qaar ee magaalooyinka dalxiiska sida Luxor iyo Dahab waxay bixiyaan a adeegga mashiinka dharka lagu dhaqdo qolka dambe, mashiinadu badanaa waa arimo hore waxaana lagaa tagayaa hawsha ah inaad karbaashid oo aad kaftid dharkaaga adigu.
Doomaha loo raaco Cyprus, Lubnaan, Suuriya iyo Turkey waa caan. Masar waxay leedahay xuduudo dhul toos ah oo leh:
Marinka Qaza (Xidhan)
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal